Ntachi obi ruo ọgwụgwụ - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Ntachi obi ruo ọgwụgwụ
Onye ọ bụla na -anọgide na Kraịst, na -amị ọtụtụ mkpụrụ
Jiri egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe gị
Soro Mmụọ Nsọ na -aga
Ịdọ aka ná ntị megide ndapụ n'ezi ofufe
Ịdọ aka na ntị Jizọs na chọọchị
Ndị ezi -omume ga -adị ndụ site n’okwukwe
Lekwasị anya n'ihe nrite ahụ
Nye onye mmeri
Onye ọ bula nke kwere n'Ọkpara ahu nwere ndu ebighi-ebi; Onye ọ bụla nke na-adịghị ege Ọkpara ya ntị agaghị ahụ ndụ, ma ọnụma Chineke na-adịgide n'ahụ ya. ( Jọn 3:36 ) Jizọs sịrị: “Abụ m osisi vaịn ahụ; unu bu alaka. Onye ọ bụla nke na-ebi n’ime m, mụ onwe m kwa n’ime ya, ọ bụ ya na-amị mkpụrụ dị ukwuu: n’ihi na unu apụghị ime ihe ọ bụla ma e wezụga mụ onwe m.” ( Jọn 15:5 ) A na-atụpụ onye ọ bụla nke na-anọgideghị na Kraịst dị ka alaka wee kpọọ nkụ; ewe chikọta alaka nile, tubà ha n'ọku, rechapu kwa ha. ( Jọn 15:6 ) Unu adịla ka ndị Farisii na ndị ọkàiwu bụ́ ndị jụrụ onwe ha nzube Chineke. ( Luk 7:30 ) Jizọs sịrị: “Ana m asị unu, ọ gwụla ma otu ọka wit ada n’ala wee nwụọ, ọ na-anọgide naanị ya; ma ọbụrụ na ọ nwụọ, ọ na-amị ọtụtụ mkpụrụ. Onye hụrụ ndụ ya n'anya ga-atụfu ya, ma onye na-akpọ ndụ ya asị n'ụwa a ga-edebe ya ruo ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ejere m ozi, ọ ghaghị iso m.” ( Jọn 12:24-26 ) Site na nke a ka e si na-enye Nna ahụ otuto, ka anyị na-amị ọtụtụ mkpụrụ ma gosi na anyị bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst. ( Jọn 15:8 ) Ọ bụrụ na anyị edebe ihe Kraịst nyere n’iwu, anyị ga-anọgide n’ịhụnanya ya, dị nnọọ ka Jizọs gbasoro iwu Nna ya ma nọgide n’ịhụnanya Nna ya. (Jọn 15:10)
A na-akụ mkpụrụ nke okwu Chineke na ndụ anyị na na ndụ ndị ọzọ. ( Luk 8:11 ) Ụfọdụ na-ada n’ụzọ, ụfọdụ n’elu nkume, ụfọdụ n’etiti ogwu, ndị ọzọ na-adakwa n’ezi ala. ( Luk 8:12-15 ) Ka ekwensu ghara ịbịa napụ okwu ahụ n’obi unu, na-egbochi unu ikwere na a ga-azọpụta unu. ( Luk 8:12 ) Adịla otu n’ime ndị ahụ kwere nwa oge, ma n’oge ule dapụ. ( Luk 8:13 ) Ka e gharakwa izuzu mkpụrụ nke okwu ahụ ogwu dị ka onye na-anụ ma kwere ma okwukwe nke a na-emesị kpagbuo nchegbu na akụ̀ na ụba na ihe ụtọ nke ndụ, n’ihi ya, ọ dịghị mkpụrụ ọ bụla na-etozu okè. ( Luk 8:14 ) Ma na-edebe onwe gị dị ka ala ọma, ka n’ịnụ okwu Chineke, ka i wee jidesie ya ike n’ezi obi na ezi obi, werekwa ndidi mịa mkpụrụ. ( Luk 8:15 ) Jizọs sịrị: “Osisi ọma apụghị ịmị ajọ mkpụrụ, osisi na-arịa ọrịa apụghịkwa ịmị ezi mkpụrụ. A na-egbutu osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, tụba ya n'ọkụ. ( Mat. 7:18-19 ) Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusaakwara otu okwu ahụ, sị: “Ọbụna ugbu a ka edoro anyụike na mgbọrọgwụ osisi: ya mere a na-egbutu osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ, tụbakwa ya n’ọkụ.” ( Luk 3:9 ) Anyị aghaghị ịmị mkpụrụ n’ikwekọ ná nchegharị. (Luk 3:8)
Bụrụnụ ndị na -e ofomi Chineke dị ka ụmụ a hụrụ n'anya. (Ndị Efesọs 5: 1) Na -ejegharị n'ịhụnanya, dịka Kraịst siri hụ anyị n'anya ma nyefee onwe ya maka anyị, onyinye na aja nye Chineke. (Ndị Efesọs 5: 2) Omume rụrụ arụ na adịghị ọcha niile ma ọ bụ anyaukwu agaghị eso anyị dịka o kwesịrị ndị nsọ. (Ndị Efesọs 5: 3) N'ezie onye ọ bụla nke na -akwa iko ma ọ bụ na -adịghị ọcha, ma ọ bụ onye nwere anyaukwu, enweghị ihe nketa n'alaeze nke Kraịst na Chineke. (Ndị Efesọs 5: 5) Ekwela ka onye ọ bụla jiri okwu efu duhie gị, n'ihi na n'ihi ihe ndị a iwe Chineke na -abịakwasị ụmụ nnupụisi. (Ndị Efesọs 5: 6) N'otu oge, ị bụ ọchịchịrị, mana ugbu a ị bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Na -ejegharị dị ka ụmụ nke ìhè (n'ihi na mkpụrụ nke ìhè dị n'ihe niile dị mma na ihe ziri ezi na eziokwu) wee nwaa ịchọpụta ihe dị Onyenwe anyị mma. (Ndị Efesọs 5: 8-10) esonyela n'ọchịchịrị na-adịghị amị mkpụrụ mana kama kpughee ha. (Ndị Efesọs 5:11) Ka anyị bụrụ ndị dị ọcha na ndị na -enweghị ụta maka ụbọchị Kraịst, jupụta na mkpụrụ nke ezi omume nke na -abịa site na Jizọs Kraịst, iji wetara Chineke otuto na otuto. (Ndị Filipaị 1: 10-11)
Jọn 15: 5-6
5 Abụ m osisi vaịn ahụ; unu bụ ẹka. Onye ọ bụla nke na -anọgide n'ime m, mụ onwe m anọgidekwa n'ime ya, ọ bụ ya na -amị mkpụrụ dị ukwuu, n'ihi na ewezuga m, ị nweghị ike ime ihe ọ bụla. 6 Ọ bụrụ na onye ọ bụla anọgideghị n'ime m, a na -atụpụ ya dị ka alaka wee kpọnwụọ; a na -achịkọtakwa alaka ya, tụba ya n'ime ọkụ wee kpọọ ya ọkụ.
(Gụọ Luk 7: 29-30.)
29 (Mgbe ndị mmadụ niile nụrụ nke a, na ndị ọnaụtụ, ha kwupụtara na Chineke bụ onye ezi omume, ebe e mere ha baptizim na baptizim nke Jọn, 30 ma ndi -Farisi na ndi -iwu jụrụ nzube Chineke maka onwe ha, emeghị ya baptism.)
Jọn 12: 23-26
23 Jisus we za ha, si, Oge hour abiawo ka ewe nye Nwa nke madu otuto. 24 N'ezie, n'ezie, Asị m unu, ọ gwụla ma ọka wit dara ma nwụọ, ọ ga -anọ naanị ya; ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ na -amị ọtụtụ mkpụrụ. 25 Onye ọ bụla nke hụrụ ndụ ya n'anya na -atụfu ya, onye ọ bụla nke kpọrọ ndụ ya asị n'ụwa a ga -edebe ya maka ndụ ebighi ebi. 26 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na -ejere m ozi, ọ ga -eso m; na ebe m nọ, n'ebe ahụ ka nwa odibo m ga -anọkwa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na -ejere m ozi, Nna m ga -asọpụrụ ya.
Jọn 15: 8-10
8 Site na nke a ka e ji nye Nna m otuto, ka unu na -amị mkpụrụ dị ukwuu wee bụrụ ndị na -eso ụzọ m. 9 Dị ka Nna m hụworo n'anya, otu ahụ ka m hụkwara gị n'anya. Nọgide n'ịhụnanya m. 10 Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n'iwu, unu ga -anọgide n'ịhụnanya m, dịka m debere iwu Nna m wee nọrọ n'ịhụnanya ya..
(Gụọ Luk 8: 11-15.)
11 Ma ilu ahu bu nka: Nkpuru ahu bu okwu Chineke. 12 Ndị nọ n'ụzọ bụ ndị nụrụ ya; mb thee ahu ekwensu bia wezuga okwu ahu n'obi -ha, ka ha we ghara ikwere, ewe zọputa ha. 13 Ndi nọ kwa n'oké nkume ahu bu ndi were ọ joyù nara okwu ahu mb whene ọ bula ha nuru okwu ahu. Ma ndia enweghi nkpọrọgwu; ha kwere na nwa oge, ma n'oge ule ha dapụ. 14 Nkpuru nke dara n'etiti ogwu ahu bu ndi nuru, ma dika ha n’agha, nchebara aka na aku na ndu nke nkpuru ha ghapu nkpuru. 15 Nkpuru nke ezi ala ahu bu ndi nuru okwu ahu, were ezi obi di nma jidesie ya ike, were kwa ntachi obi mia nkpuru.
(Gụọ Luk 3: 8-9.)
8 Mia nkpuru dika nchèghari si di. Unu amalitekwala ịsị n'obi unu, 'Anyị nwere Abraham dị ka nna anyị.' N'ihi na asim unu, na Chineke puru ime ka umu tolitere site na nkume ndị a. 9 Ọbuná ub theu a anātukwasi anyu -ike na nkpọrọgwu osisi nile. Ya mere osisi ọ bụla nke na -adịghị amị ezi mkpụrụ na -egbutu tụba ya n'ime ọkụ. "
Matiu 7: 18-20
18 A osisi dị mma enweghị ike ịmị mkpụrụ ọjọọ, osisi na -arịa ọrịa apụghịkwa ịmị ezi mkpụrụ. 19 Osisi ọ bụla nke na-adịghị amị ezi mkpụrụ na-egbutu ma tụba ya n'ime ọkụ. 20 Ya mere, unu ga -amata ha site na mkpụrụ ha.
(Ndị Efesọs 5: 1-11)
1 Ya mere, bụrụ ndị na-eṅomi Chineke, dị ka ụmụ a hụrụ n'anya. 2 Na-eje ije n'okwukwe, dịka Kraịst hụrụ anyị n'anya nyefee Onwe ya maka anyị, onyinye na-esi ísì ụtọ na àjà nye Chineke. 3 Ma ịkwa iko nke rụrụ arụ na adịghị ọcha niile ma ọ bụ anyaukwu ekwesịghị ọbụna ịkpọ aha n'etiti gị, dịka o kwesiri n'etiti ndị nsọ. 4 Ekwela ka idi-ọcha ma-ọbu okwu nzuzu, ma-ọbu igwu egwu, nke nādighi n'ebe di anya; 5 N'ihi na ị mara nke a, na onye ọ bụla nke na -akwa iko ma ọ bụ na -adịghị ọcha, ma ọ bụ onye nwere anyaukwu (ya bụ, onye na -ekpere arụsị), enweghị ihe nketa n'alaeze nke Kraịst na Chineke.. 6 Ekwela ka onye ọ bụla jiri okwu efu duhie gị, n'ihi na ọ bụ n'ihi ihe ndị a ka ọnụma Chineke ji abịakwasị ụmụ nnupụisi.. 7 Ya mere, unu esola ha na -emekọ ihe; 8 n'ihi na ọ dị mgbe unu bụ ọchịchịrị, ma ugbu a unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị. Na -eje ije dị ka ụmụ nke ìhè 9 (n'ihi na mkpụrụ nke ìhè dị n'ihe niile dị mma na ihe ziri ezi na eziokwu), 10 gbalịanụ chọpụta ihe dị Onyenwe anyị mma. 11 Esokwala n'ọchịchịrị na -adịghị amị mkpụrụ, mana kama kpughee ha.
(Ndị Filipaị 1: 10-11)
10 ka i wee kwado ihe dị mma, na otu ahụ dị ọcha na enweghị ụta maka ụbọchị Kraịst, 11 juputa na nkpuru nke ezi omume nke sitere na Jisus Kraist, inye Chineke otuto na otuto.
Anyị ga -edobe nrube isi n'okwu nke Kraịst na ndị ozi ya, jiri ụjọ na ịma jijiji na -arụpụta nzọpụta anyị. (Ndị Filipaị 2:12) Site na nrube isi, Chineke na -arụ ọrụ n'ime anyị, ma na -achọ ma na -arụkwa ọrụ maka ọdịmma ya. (Ndị Filipaị 2:13) Anyị ga -emerịrị ihe niile na -enweghị ntamu ma ọ bụ na -ese okwu, ka anyị wee bụrụ ndị na -enweghị ụta na ndị aka ha dị ọcha, ụmụ Chineke na -enweghị mmerụ n'etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, nke anyị na -enwu dị ka ọkụ n'ụwa, na -ejigide ya. ngwa ngwa n'okwu nke ndu. (Ndị Filipaị 2: 14-16) Anyị agaghịzi na -eje ije dị ka ndị ụwa na -eme, na ihe efu nke uche ha. (Ndị Efesọs 4:17) Ha na -agba ọchịchịrị na nghọta ha, bụrụ ndị e kewapụrụ na ndụ Chineke n'ihi amaghị nke dị n'ime ha, n'ihi obi kpọrọ nkụ ha. (Ndị Efesọs 4:18) Ha aghọọla ndị obi tara mmiri ma nyefee onwe ha maka agụụ mmekọahụ, na -enwe anyaukwu ime ụdị adịghị ọcha ọ bụla. (Ndị Efesọs 14:19) Kama nke ahụ, ọ bụrụ na anyị bụ ndị kwere ekwe n'ezie, anyị amụtala Kraịst - ka anyị yipụ ụdị mmadụ ochie anyị, nke bụ ụdị ndụ anyị na mbụ, nke na -emerụkwa site n'ọchịchọ aghụghọ, na iji mee ka mmụọ nke mmụọ anyị dị ọhụrụ. uche, na iyikwasị mmadụ ọhụrụ ahụ, nke e kere n'oyiyi Chineke n'ezi omume na ịdị nsọ. (Ndị Efesọs 4: 20-24)
Kwadebe uche gị maka ime ihe, nwee uche zuru oke, na-atụkwasị olileanya gị nke ọma na amara nke a ga-ewetara gị na mkpughe nke Jizọs Kraịst. (1Pet 1:13) Dị ka ụmụ na -erube isi, unu ekwela ka ọchịchọ nke amaghị nke mbụ unu, kama dịka onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu ga -adịkwa nsọ n'omume unu niile, ebe ọ bụ na e dere, sị, “Ị ga -adị nsọ. , n'ihi na adị m nsọ. ” (1Pet 1: 14-16) Ọ bụrụ na ị kpọkuo ya dị ka Nna nke na-ekpe ikpe n'eleghị mmadụ anya n'ihu dị ka omume onye ọ bụla si dị, jiri egwu mee onwe gị n'oge ndụ gị niile n'ime afọ a, mara na a gbapụtara gị n'ụzọ efu nke ketara n'aka nna nna gị, ọ bụghị jiri ihe ndị pụrụ ire ure dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọla edo, kama jiri ọbara dị oke ọnụ ahịa nke Kraịst, dị ka nke nwa atụrụ na -enweghị ntụpọ ma ọ bụ ntụpọ. (1Pet 1: 17-19) Ebe unu meela ka mkpụrụ obi unu dị ọcha site na nrube isi unu nye eziokwu, hụrịta ibe unu n'anya nke ukwuu site n'obi dị ọcha, ebe a mụrụ unu ọzọ, ọ bụghị site na mkpụrụ na-emebi emebi kama nke na-apụghị ire ure, site n'okwu dị ndụ na nke na-adịgide adịgide. Chukwu. (1 Pita 1: 22-23)
Ebe Kraịst tara ahụhụ n’anụ ahụ́, werenụ otu echiche ahụ kee onwe unu, n’ihi na onye ọ bụla nke tara ahụhụ n’anụ ahụ́ akwụsịla ná mmehie, ka ọ ghara ịdịkwa ndụ ọzọ maka ọchịchọ ụmụ mmadụ kama ime uche Chineke. (1 Pita 4:1-2) N’ihi na oge gara aga ezuola ime ihe ndị Jentaịl chọrọ ime, ibi ndụ n’anụ ahụ́, agụụ mmekọahụ, ịṅụbiga mmanya ókè, oriri oké mkpọtụ, oriri na ọṅụṅụ, na ikpere arụsị nke na-emebi iwu. (1 Pita 4:3) Ya ejula gị anya n'ọnwụnwa dị ọkụ na-abịakwasị gị iji nwaa gị, dị ka à ga-asị na ihe na-eju anya na-eme gị. (1 Pita 4:12) Ma ṅụrịa ọṅụ n'ihi na unu na-ekere òkè ná nhụjuanya Kraịst, ka unu wee ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ mgbe a ga-ekpughe ebube ya. (1 Pita 4:13) Ọ bụrụ na a na-akọcha unu n’ihi aha Kraịst, a gọziri unu, n’ihi na Mmụọ nke ebube na nke Chineke dị n’ahụ́ unu. (1 Pita 4:14) Ọ bụrụ na onye ọ bụla ata ahụhụ dị ka Onye Kraịst, ka ihere ghara ime ya, kama ka o nye Chineke otuto n’aha ahụ. (1 Pita 4:16) Ka ndị na-ata ahụhụ dị ka uche Chineke si dị nyefee Onye Okike kwesịrị ntụkwasị obi n'obi ma na-eme ihe ọma. (1 Pita 4:19) Ya mere, wedanụ onwe unu ala n’okpuru aka dị ike nke Chineke ka o wee bulie unu elu n’oge kwesịrị ekwesị, na-atụkwasịnụ ya nchegbu unu nile, n’ihi na ọ na-eche banyere unu. (1 Pita 5:6-7) Nwee uche ziri ezi; lezienụ anya - Onye iro gị ekwensu na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa. (1 Pita 5:8) Guzosienụ ya ike, guzosie ike n’okwukwe unu, ebe ị maara na òtù ụmụnna unu na-enwe ụdị ahụhụ ndị ahụ n’ụwa niile. (1 Pita 5:9) Ma mb͕e unu taworo ahuhu nwa oge, Chineke nke amara nile, Onye kpọworo unu n'ebube ebighi-ebi Ya nime Kraist, gēweghachi unu, guzosie ike, wusie unu ike, me kwa ka unu guzosie ike. (1 Pita 5:10)
Ike Chineke enyewo anyị ihe niile gbasara ndụ na nsọpụrụ Chineke, site n’ọmụma nke Onye kpọpụtara anyị n’ebube na ịdị elu nke Ya, nke O werewooro anyị nkwa ya dị oké ọnụ ahịa dị ukwuu, ka unu wee site n’aka ha. nwere ike ịbụ ndị na-ekere òkè n'ụdị Chineke, ebe ha gbanarịworo n'ire ure nke dị n'ụwa n'ihi ọchịchọ mmehie. ( 2 Pita 1:3-4 ) N’ihi ya, gbalịanụ na-agbalịsi ike ime ka okwukwe unu sikwuo ike site n’ịdị mma, na ịdị mma n’ihe ọmụma, na ihe ọmụma na njide onwe onye, ​​na njide onwe onye, ​​ya na iguzosi ike n’ezi ihe, na iguzosi ike n’ezi ihe, ya na nsọpụrụ Chineke, na nsọpụrụ Chineke. ịhụnanya ụmụnna, na ịhụnanya ụmụnna na ịhụnanya. (2 Pita 1:5-7) N’ihi na ọ bụrụ na àgwà ndị a bụ nke unu ma na-aba ụba, ha na-egbochi unu ịbụ ndị na-adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ ndị na-adịghị amị mkpụrụ n’ihe ọmụma nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. (2 Pita 1:8) Onye ọ bụla nke na-enweghị àgwà ndị a na-ahụ ụzọ nke ọma nke na ọ kpuru ìsì, ebe o chefuru na e sachapụla ya ná mmehie mbụ ya. (2 Pita 1:9) Ya mere, na-agbalịsi ike karị iji kwado ọkpụkpọ na nhọpụta gị, n'ihi na ị gaghị ada ma ọlị ma ọ bụrụ na ị na-eme àgwà ndị a. (2 Pita 1:10) Otú a ka a ga-esi mee ka anyị banye n’alaeze ebighị ebi nke Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị bụ́ Jizọs Kraịst. (2 Pita 1:11)
Ụbọchị Onyenwe anyị ga -abịa dị ka onye ohi, mgbe ahụ ka eluigwe ga -eji ụzụ na -agabiga, a ga -agbakwa ihe ndị dị n'eluigwe ọkụ ma gbazee, a ga -ekpughekwa ụwa na ọrụ ndị a na -arụ na ya. (2Pet 3:10) Ebe ọ bụ na a ga -agbaze ihe ndị a niile, anyị kwesịrị ibi ndụ ịdị nsọ na nsọpụrụ Chineke, na -eche ma na -eme ọbịbịa nke ụbọchị Chineke ngwa ngwa, nke ga -esite n'elu ya gbaa ọkụ wee gbaze. (2Pet 3: 11-12) Mana dịka nkwa ya si dị, anyị na-eche eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ nke ezi omume bi n'ime ya. (2Pet 3:13) Ndị m hụrụ n'anya, ebe ị na -eche ndị a, dị uchu ka ọ hụ gị n'enweghị ntụpọ ma ọ bụ mmerụ, yana n'udo. (2 Pita 3:14)
Chineke adịghị ekpe ikpe na -ezighị ezi ka o leghara ọrụ unu na ịhụnanya nke unu gosiri maka aha ya anya n'ijere ndị nsọ ozi, dịka unu ka na -eme. (Ndị Hibru 6:10) Nọgidenụ na -enwe otu ịnụ ọkụ n'obi ahụ ka ị nwee nkwenye zuru oke nke olile anya ruo ọgwụgwụ, ka ị ghara ịdị umengwụ, kama na -e imomi ndị sitere n'okwukwe na ndidi keta nkwa. (Hib 6: 11-12) Ka anyị jidesie nkwupụta nke olile anya anyị ike na-amapụtaghị, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. (Ndị Hibru 10:23) Ka anyị tụlee ka anyị ga -esi kpalie onwe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ na -agbarịta ibe anyị ume ka anyị na -ahụ ụbọchị ahụ ka ọ na -eru nso. (Ndị Hibru 10: 24-25) Ejila ịdọ aka ná ntị nke Onyenwe anyị egwu egwu, adakwala mbà mgbe ọ na-abara gị mba. (Ndị Hibru 12: 5) N'ihi na Onyenwe anyị na -adọ onye ọ hụrụ n'anya aka na ntị, na -adọkwa nwa ọ bụla ọ nabatara ahụhụ. (Ndị Hibru 12: 6) Ọ bụrụ na ahapụghị gị n'ịdọ aka ná ntị, mgbe ahụ ị bụ ụmụaka akwụna ọ bụghị ụmụ. (Ndị Hibru 12: 8) N'oge a, ịdọ aka ná ntị niile yiri ihe na -egbu mgbu kama ịbụ ihe na -atọ ụtọ, mana emesịa ọ na -amịrị ndị ọ zụrụ ọzụzụ udo nke ezi omume. (Ndị Hibru 12:11) Ya mere welie aka gị na -ada ada ma mee ka ikpere gị na -esighị ike sie ike, mezie ụkwụ gị ụzọ kwụ ọtọ, ka ihe nkwarụ ghara ịpụ na nkwonkwo kama ka a gwọọ ya. (Hib 12: 12-13) Gbalịsie ike ka gị na mmadụ niile dịrị n'udo, na maka ịdị nsọ nke na-enweghị onye ọ bụla ga-ahụ Onyenwe anyị. (Ndị Hibru 12:14)
(Ndị Filipaị 2: 12-16)
Ndị m hụrụ n'anya, dị ka ị na -erube isi oge niile, ugbu a ugbu a, ọ bụghị naanị dị ka ọnụnọ m kama ọtụtụ ihe mgbe m na -anọghị, jiri egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe unu, 13 n'ihi na ọ bụ Chineke na -arụ ọrụ n'ime unu, ma ị na -achọ ma na -arụ ọrụ maka ihe dị ya ụtọ. 14 Na -eme ihe niile na -enweghị ntamu ma ọ bụ na -ese okwu, 15 ka unu wee bụrụ ndị aka ha dị ọcha na ndị aka ha dị ọcha, ụmụ Chineke n’enweghị ntụpọ n’etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị ị na -enwu dị ka ọkụ n'ụwa, 16 jidesie okwu nke ndụ ike.
(Ndị Efesọs 4: 17-24)
17 Ma nka ka m'n andkwu, nāb testia kwa àmà nime Onye -nwe -ayi, na Ị gaghị ejekwa ije ọzọ dị ka ndị mba ọzọ na -eme, n'ihe efu nke uche ha. 18 Ha na -agba ọchịchịrị na nghọta ha, bụrụ ndị e kewapụrụ na ndụ Chineke n'ihi amaghị nke dị n'ime ha, n'ihi obi kpọrọ nkụ nke obi ha. 19 Ha aghọwo ndị obi tara mmiri wee nyefee onwe ha nye anụ arụ, na -enwe anyaukwu ime ụdị adịghị ọcha ọ bụla. 20 Ma ọ bụghị otú ahụ ka ị si mụta Kraịst! - 21 na-eche na ị nụwo banyere ya, a kuzikwara gị banyere ya, dị ka eziokwu si dị na Jizọs, 22 tyipụ mmadụ ochie gị, nke bụ ụdị ndụ ị na -emebu, nke na -emerụkwa site n'ọchịchọ aghụghọ, 23 ka e meekwa ka mmụọ nke uche unu dị ọhụrụ. 24 na yikwasịkwa ụdị mmadụ ọhụrụ ahụ, nke e kere nʼọdịdị nke Chineke n’ezi omume na ịdị nsọ.
(1 Pita 1: 13-25)
13 Ya mere, na-akwadebe uche gị maka ime ihe, na inwe uche zuru oke, debe olile anya gị nke ọma na amara nke a ga -ewetara gị na mkpughe nke Jizọs Kraịst. 14 Dị ka ụmụ na -erube isi, unu ekwela ka ọchịchọ nke amaghị nke mbụ unu, 15 kama dika onye kpọrọ unu dị nsọ, unu onwe unu dịkwa nsọ n'omume unu niile, 16 n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Unu gādi nsọ, n'ihi na nsọ ka Mu onwem di. 17 Ọ buru kwa na unu akpọku Ya dika Nna, Onye n judgeskpe ikpe n impleghi madu anya dika omume onye ọ bula si di, were egwu tua onwe -unu n'ubọchi emere ka unu je biri n'ala ọzọ; 18 ebe unu matara na agbapụtara unu n'uzọ efu nke nna nna unu hà ketara unu, ọ bụghị n'ihe ndị pụrụ ire ure dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, 19 kama site n'ọbara di oke ọnụ ahịa nke Kraist, dị ka nke nwa atụrụ na -enweghị ntụpọ ma ọ bụ ntụpọ. 20 Ebu ụzọ mara ya tupu a tọọ ntọala ụwa mana emere ka ọ pụta ìhè n'oge ikpeazụ n'ihi gị 21 ndi sitere n'aka -Ya kwere na Chineke, Onye mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, nye kwa Ya otuto, ka okwukwe -unu na olile -anya -unu di na Chineke.
22 Ebe unu meworo ka mkpụrụ obi unu dị ọcha site na nrube isi unu nye eziokwu maka ezi ịhụnanya ụmụnna, jiri obi ọcha hụ ibe unu n'anya, 23 ebe a mụrụ unu ọzọ, ọ bụghị site na mkpụrụ nke pụrụ ire ure kama nke na -adịghị emebi emebi, site n'okwu Chineke dị ndụ ma na -adigide; 24 n'ihi na “Anụ ahụ niile dị ka ahịhịa, ebube ya niile dịkwa ka ifuru ahịhịa. Ahịhịa akpọnwụwo, okooko ya adaa, 25 ma okwu nke Onye -nwe na -adigide ruo mgbe nile. " Okwu a bụkwa ozi ọma nke ekwusara unu.
(1 Pita 4: 1-6)
1 Ebe Kraist huru ahu n'anu -aru, kee onwe unu otu echiche, n'ihi na onye ọ bụla tara ahụhụ n'anụ ahụ akwụsịla mmehie, 2 ka ọ ghara ịdị na -ebi ndụ ruo oge fọdụrụ n'anụ ahụ maka agụụ mmadụ kama ọ bụ maka uche Chineke. 3 N'ihi na oge gara aga ezuola ime ihe ndị mba ọzọ na -achọ ime, ibi ndụ n'ime agụụ mmekọahụ, agụụ mmekọahụ, ị ​​dụbiga mmanya ókè, ị orụbiga mmanya ókè, ị drinkingụ mmanya, na ikpere arụsị nke iwu na -akwadoghị. 4 Banyere nke a, ọ na -eju ha anya mgbe ị sonyeghị ha n'otu oke ịkwa iko, ha na -ekwutọ gị; 5 ma ha ga -aza ajụjụ nye onye ahụ nke dị njikere ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. 6 N'ihi na ọ bụ nke a mere ekwusara ndị nwụrụ anwụ ozi ọma, ka a ga -ekpe ha ikpe n'anụ ahụ dịka a na -ekpe ndị mmadụ, ha ga -ebi na mmụọ dịka Chineke si eme.
(1 Pita 4: 12-19)
12 Ndị m hụrụ n'anya, ka ọnwụnwa na -enwu ọkụ ghara ịtụ gị n'anya mgbe ọ ga -abịakwasị gị ịnwale gị, dị ka a ga -asị na ihe dị ịtụnanya na -eme gị. 13 Ma ka obi nātọ unu utọ ka unu n sharenwekọ ahuhu Kraist, ka unu onwe -unu we rejoiceuria kwa, beuria ọ whenu, mb ise ekpughere ebube -Ya. 14 Ọ bụrụ na a na -akparị gị n'ihi aha Kraịst, ngọzi na -adịrị gị, n'ihi na mmụọ nke ebube na nke Chineke dịkwasịrị gị. 15 Ma ka onye ọ bụla n'ime unu ghara ịta ahụhụ dị ka onye na -egbu ọchụ ma ọ bụ onye ohi ma ọ bụ onye na -eme ihe ọjọọ ma ọ bụ onye na -etinye ọnụ. 16 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na -ata ahụhụ dị ka onye Kristian, ka ihere ghara ime ya, kama ka ọ too Chineke n'aha ahụ. 17 N'ihi na oge eruola ka ikpe malite n'ezinụlọ Chineke; ọ bụrụkwa na ọ malitere anyị, gịnị ga -eme ndị na -adịghị erube isi n'ozi ọma Chineke? 18 Na "Ọ bụrụ na a gaghị azọpụta onye ezi omume, gịnị ga -eme ndị na -adịghị asọpụrụ Chineke na onye mmehie?" 19 Ya mere ka ndị na -ata ahụhụ dị ka uche Chineke si dị na -enyefe mkpụrụ obi ha n'aka Onye Okike kwesịrị ntụkwasị obi ka ha na -eme ihe ọma.
(1 Pita 5: 6-10)
6 Ya mere wedanụ onwe unu ala n'okpuru aka dị ike nke Chineke ka o wee bulie unu elu n'oge ya, 7 na -atụkwasịnụ ya nchegbu unu niile, n'ihi na ihe banyere unu na -emetụ ya n'obi. 8 Nwee uche zuru oke; mụrụ anya. Onye mmegide gị ekwensu na -agagharị dị ka ọdụm na -ebigbọ ebigbọ, na -achọ onye ọ ga -eripịa. 9 Guzogide ya, guzosie ike n'okwukwe gị, ebe ị matara na ụdị ahụhụ a bụ otu ụmụnna na -enwe n'ụwa niile. 10 na mgbe ị tasịrị ahụhụ nwa oge, Chineke nke amara niile, onye kpọrọ gị ka ọ bịa n'ebube ebighi ebi ya n'ime Kraịst, ga -eweghachi gị, kwado gị, mee gị ike, meekwa ka ị guzosie ike..
(2 Pita 1: 2-11)
2 Ka amara na udo dịrị unu na ihe ọmụma nke Chineke na nke Jisọs Onyenwe anyị. 3 Ike ya dị nsọ enyela anyị ihe niile gbasara ndụ na nsọpụrụ Chineke, site n'ọmụma nke onye kpọrọ anyị n'ebube na ịdị mma ya, 4 site na nke o jiri nye anyị nkwa ya dị oke ọnụ ahịa na nke ukwuu, nke mere na site na ha unu nwere ike bụrụ ndị ikere oke n'ọdịdị nke Chukwu, ebe unu gbapụrụ na nrụrụ aka nke dị n'ụwa n'ihi agụụ mmehie. 5 N'ihi nke a, gbalịanụ ka ime ka okwukwe unu dị mma, werekwa ihe ọmụma gbakwunyere omume ọma, 6 na ihe ọmụma na njide onwe onye, ​​na njide onwe onye na nkwụsi ike, na ntachi obi na nsọpụrụ Chineke; 7 na nsọpụrụ Chineke jiri ịhụnanya ụmụnna, were ịhụnanya ụmụnna hụ onwe unu n'anya. 8 N'ihi na ọ bụrụ na àgwà ndị a bụ nke gị ma na -abawanye, ha ga -egbochi gị ịbụ ndị na -abaghị uru ma ọ bụ ndị na -adịghị amị mkpụrụ n'ime ihe ọmụma nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. 9 N'ihi na onye ọ bụla nke na -enweghị àgwà ndị a na -ahụ ụzọ nke na ọ kpuru ìsì, ebe ọ chefuru na a sachara ya na mmehie mbụ ya. 10 Ya mere, ụmụnna m, na -agbasi mbọ ike ikwenye ọkpụkpọ na ntuli aka gị, n'ihi na ọ bụrụ na ị na -eme àgwà ndị a, ị gaghị ada. 11 n'ihi na n'ụzọ dị otú a, a ga -enye gị ohere ịba ụba n'ime alaeze ebighị ebi nke Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị Jizọs Kraịst.
(2 Pita 3: 8-14)
Ma unu echefula otu eziokwu a, ndị m hụrụ n'anya, na n'ebe Onyenwe anyị nọ otu ụbọchị dị ka otu puku afọ, otu puku afọ dịkwa ka otu ụbọchị. 9 Onyenwe anyị adịghị egbu oge imezu nkwa ya dịka ụfọdụ na -agụ na ọ na -egbu oge, kama ọ na -enwe ndidi n'ebe unu nọ, ọ chọghị ka onye ọ bụla laa n'iyi, kama ka mmadụ niile ruo nchegharị. 10 Ma ụbọchị Onyenwe anyị ga -abịa dị ka onye ohi, mgbe ahụ ka eluigwe ga -eji oke mkpọtụ gafee, a ga -agbakwa ihe ndị dị n'eluigwe ọkụ ma gbazee, a ga -ekpughekwa ụwa na ọrụ ndị a na -arụ na ya. 11 Ebe ọ bụ na ihe ndị a niile ka a ga -agbaze, ụdị mmadụ dị a oaa ka unu kwesịrị ịbụ na ndụ nke ịdị nsọ na nsọpụrụ Chineke., 12 na -eche ma na -eme ọbịbịa nke ụbọchị Chineke ngwa ngwa, nke a ga -esite n'eluigwe gbaa ya ọkụ wee gbaze, ihe ndị dị na mbara igwe ga -agbazekwa ka ha na -agba! 13 Mana dịka nkwa ya si dị, anyị na -eche eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ nke ezi omume bi n'ime ya. 14 Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, ebe ị na -eche ndị a, dị uchu ka ọ hụ ya n'enweghi ntụpọ ma ọ bụ mmerụ, yana n'udo.
Ndị Hibru 6: 9-12
9 Ọ bụ ezie na anyị na -ekwu otu a, ma na nke gị, ndị m hụrụ n'anya, anyị na -ejide n'aka maka ihe ndị ka mma - ihe ndị bụ nke nzọpụta. 10 N'ihi na Chineke abụghị onye ajọ omume ileghara ọrụ unu na ịhụnanya nke unu gosiri maka aha ya anya n'ijere ndị nsọ ozi, dị ka ị ka na -eme. 11 Anyị na -achọkwa ka onye ọ bụla n'ime unu gosipụta otu ụdị ịnụ ọkụ n'obi ahụ ka o wee nwee olile anya zuru oke nke olileanya ruo ọgwụgwụ, 12 ka unu we ghara idi ume -ngwu, kama ka unu buru ndi natorsomi ndi ahu ndi sitere n'okwukwe na ogologo -ntachi -obi keta nkwa ahu.
Ndị Hibru 10: 23-25
23 Ka anyị jidesie nkwupụta nke olile anya anyị ike n'amaghị jijiji, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. 24 na ka anyị tụlee ka anyị ga -esi kpalie onwe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, 25 na -eleghara izukọ ọnụ anya, dịka ọ na -emekarị ụfọdụ, mana na -agbarịta ibe unu ume, na -agbakwa mbọ ka unu na -ahụ ụbọchị ahụ ka ọ na -eru nso.
Ndị Hibru 12: 5-17
“Nwa m nwoke, eledala ịdọ aka ná ntị nke Jehova anya, adakwala mbà mgbe ọ na -abara ya mba. 6 N'ihi na Jehova na -adọ onye ọ hụrụ n'anya aka na ntị, Ọ na -adọkwa nwa nwoke ọ bụla ọ nabatara aka. " 7 Ọ bụ maka ịdọ aka na ntị ka ị ga -atachi obi. Chineke na -emeso gị dịka ụmụ. N'ihi na olee nwa nke nna ya na -anaghị adọ aka ná ntị? 8 Ọ bụrụ na a hapụrụ gị na -enweghị ịdọ aka ná ntị, nke mmadụ niile sonyere na ya, mgbe ahụ ị bụ ụmụaka akwụna, ọ bụghịkwa ụmụ. 9 Ewezuga nke a, anyị nwere ndị nna nke ụwa ndị dọrọ anyị aka na ntị ma kwanyere ha ugwu. Ọ bụ na anyị agaghị edo onwe anyị n'okpuru Nna nke mmụọ ma dị ndụ karịa? 10 N'ihi na ha nādọ ayi aka na nti nwa oge dika ọ masiri ha: ma Ọ na -adọ anyị aka na ntị maka ọdịmma anyị, ka anyị wee keta ịdị nsọ ya. 11 Ka ọ dị ugbu a, ịdọ aka na ntị niile yiri ihe na -egbu mgbu kama ịbụ ihe na -atọ ụtọ, mana emesịa ọ na -amịrị ndị ọ zụrụ mkpụrụ udo..
12 Ya mere welie aka gị na -ada ada wee mee ka ikpere gị na -adịghị ike sie ike. 13 merenụ ụkwụ unu ụzọ kwụ ọtọ, ka e wee ghara ibibi ihe ngwụrọ, kama ka a gwọọ ya. 14 Gbalịsie ike ka gị na mmadụ niile dịrị n'udo, na maka ịdị nsọ nke enweghị onye ga -ahụ Onyenwe anyị. 15 Hụ na ọ dịghị onye na -akwụsị inweta amara Chineke; ka ọ ghara inwe “mgbọrọgwụ nke ilu” nke na -ebute nsogbu, sitekwa na ya na -emetọ ọtụtụ; 16 na ọ dịghị onye na -akwa iko ma ọ bụ na -adịghị nsọ dịka Isọ, onye rere ọnọdụ ọkpara ya maka otu nri. 17 N'ihi na unu mara na n'ikpeazụ, mgbe ọ chọrọ iketa ngọzi ahụ, a jụrụ ya, n'ihi na ọ hụghị ohere ichegharị, n'agbanyeghị na o ji anya mmiri chọọ ya.
Na -ejegharị site na mmụọ nsọ, ị gaghị emeju agụụ anụ ahụ. (Gal 5: 16) N'ihi na agụụ nke anụ ahụ megidere mmụọ nsọ, agụụ nke mmụọ na -emegide anụ ahụ. (Gal 5:17) Ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ ịkwa iko, ikpere arụsị, ịgba afa, iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, asọmpi, esemokwu, nkewa, anyaụfụ, ịrunụbiga mmanya ókè, oriri ike, na ihe ndị ọzọ. ndị a. Kpachara anya, na ndị na -eme ụdị ihe a agaghị eketa alaeze Chineke. (Gal 5: 19-21) Ndị nke Kraịst Jizọs akpọgidela anụ ahụ ya na agụụ ihe ọjọọ ya. (Gal 5:24) Mana mkpụrụ nke mmụọ bụ ịhụnanya, ọ joyụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; ọ dịghị iwu na -emegide ihe ndị dị otú a. (Gal 5: 22-23) Ọ bụrụ na mmụọ nsọ na-edu gị, ị nọghị n'okpuru iwu. (Gal 5:18) Ọ bụrụ na anyị na -ebi ndụ site na mmụọ nsọ, ka anyị na -esokwa mmụọ nsọ. (Ndị Galetia 5:25) Ekwela ka eduhie gị: Chineke abụghị onye a na -akwa emo, n'ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na -agha, nke ahụ ka ọ ga -ewetakwa n'ubi. (Ndị Galetia 6: 7) N'ihi na onye na -agha mkpụrụ maka anụ ahụ nke ya ga -esite n'anụ ahụ weta nrụrụ aka, mana onye na -agha mkpụrụ maka mmụọ ga -esite na mmụọ wee nweta ndụ ebighi ebi. (Gal 6: 8) Ka ike ghara ịgwụ anyị ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru anyị ga -aghọrọ mkpụrụ ya, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà. (Ndị Galetia 6: 9)
Anyị ga -agbasi ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya. (Ndị Efesọs 6:10) Yikwasịnụ ihe agha niile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide atụmatụ aghụghọ nke ekwensu. (Ndị Efesọs 6:11) N'ihi na anyị anaghị agba mgba megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị ọchịchị, megide ndị ọchịchị, megide ike nke ụwa banyere ọchịchịrị dị ugbu a, megide mmụọ ime mmụọ nke ihe ọjọọ n'ebe ndị dị n'eluigwe. (Ndị Efesọs 6:12) Ya mere burunụ ekike agha niile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide ajọ ụbọchị ahụ, na ime ihe niile, iguzosi ike. (Ndị Efesọs 6:13) Ya mere guzosinụ, ebe unu yikwasịrị eziokwu nke ọma, yirikwa ihe mgbochi obi nke ezi omume, yikwasịakwa akpụkpọ ụkwụ unu, yikwasị ịdị njikere ozi ọma nke udo nyere. (Ndị Efesọs 6: 14-15) N'ọnọdụ niile buru ọta nke okwukwe, nke ị ga-eji gbanyụ akụ niile na-ere ọkụ nke ajọ onye ahụ; werekwanu okpu agha nke nzọpụta, werekwa mma agha nke mmụọ nsọ, nke bụ okwu Chineke. (Ndị Efesọs 6: 16-17) Na-ekpe ekpere oge niile n'ime mmụọ, jiri ekpere na arịrịọ niile na-amụ anya na ntachi obi niile. (Ndị Efesọs 6:18) Ndị na -akpata nkewa bụ ndị ụwa, nke mmụọ adịghị. (Jud 1:19) Mana anyị ga -ewuli onwe anyị elu n'okwukwe anyị ma na -ekpe ekpere na Mmụọ Nsọ, na -edebe onwe anyị n'ịhụnanya Chineke, na -eche ebere Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nke na -eduga na ndụ ebighi ebi. (Jud 20-21)
Ndị Galetia 5: 16-25
16 Ma m na -ekwu, na -ejegharị site na Mmụọ, ị gaghị emeju agụụ anụ ahụ. 17 N'ihi na ọchịchọ nke anụ arụ na -emegide mmụọ nsọ, ọchịchọ nke mmụọ na -emegidekwa anụ ahụ, n'ihi na ndị a na -emegide ibe ha, iji gbochie gị ime ihe ndị ị chọrọ ime. 18 Ma ọ bụrụ na mmụọ nsọ na -edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu. 19 Ugbu a ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, 20 ikpere arụsị, ịgba afa, ibu iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, ịma aka, esemokwu, nkewa, 21 anyaụfụ, mmanya, mmanya, na ihe ndị dị ka ndị a. Ana m adọ unu aka na ntị, dịka m buru ụzọ dọọ unu aka na ntị, na ndị na -eme ụdị ihe a agaghị eketa alaeze Chineke. 22 Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, 23 ịdị nwayọọ, njide onwe onye; ọ dịghị iwu na -emegide ihe ndị dị otú a. 24 Ma ndi nke Kraist Jisus kpogidere anu -aru n'obe, ya na agu ihe ọjọ nile ya.
25 Ọ bụrụ na anyị na -ebi ndụ site na mmụọ nsọ, ka anyị na -esokwa mmụọ nsọ.
Ndị Galetia 6: 7-9
7 Unu ekwela ka eduhie unu: A naghị akwa Chineke emo: n'ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ na -agha, nke ahụ ka ọ ga -ewetakwa n'ubi. 8 N'ihi na onye na -agha mkpụrụ nye anụ ahụ nke ya ga -esite n'anụ ahụ ahụ weta ire ure; ma onye nāgha nkpuru nye Mọ Nsọ g fromsite na Mọ Nsọ weta ndu ebighi -ebi. 9 Ka ike gharakwa ịgwụ anyị ime ihe ọma, n'ihi na oge ruru oge anyị ga -aghọrọ mkpụrụ, ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà.
(Ndị Efesọs 6: 10-18)
10 Nke ikpe-azu, menu onwe-unu ka unu di ike nime Onye-nwe-ayi, ya na nime idi-ike nke ike-ya. 11 Yikwasinu ihe -agha nile nke Chineke, ka unu we pu iguzogide ihe nile ekwensu nmeszuputa. 12 N'ihi na anyị anaghị agba mgba megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị na-achị achị, imegide ndị isi, megide ike ụwa na ọchịchịrị nke ugbu a, megide ikike ime mmụọ nke ihe ọjọọ n'ebe ndị dị n'eluigwe. 13 Ya mere chiri ihe -agha nile nke Chineke, ka unu we pu iguzogide n'ajọ ubọchi, na ime ihe nile, iguzosi ike. 14 Guzosie ike, yikwasịnụ eziokwu nke ọma, yirikwa ihe mgbochi obi nke ezi omume. 15 yikwasi kwa akpụkpọ-ụkwụ dị ka ukwu-unu, mb havinge unu yikwasiri njikere nke ozi ọma nke udo nyeworo. 16 N’ime ọnọdụ nile bulie ọta nke okwukwe, nke unu nwere ike iji menyụ akụ́ ụta nile na-enwu ọkụ nke ajọ onye ahụ; 17 were kwa okpu-agha nke bu nzọputa, ya na mma-agha nke Mọ Nsọ, nke bu okwu Chineke. 18 na -ekpe ekpere oge niile n'ime Mmụọ, jiri ekpere na arịrịọ niile. Maka nke ahụ, mụrụnụ anya na ntachi -obi niile, na -arịọsiri ndị nsọ niile arịrịọ ike
Jud 1: 19-23 (NLT)
19 Ọ bụ ndị a na -ebute nkewa, ndị ụwa, na -enweghị mmụọ. 20 Ma unu, ndị m hụrụ n'anya, na -ewuli onwe unu elu n'okwukwe unu nke kachasị nsọ, na -ekpekwa ekpere na Mmụọ Nsọ, 21 debe onwe -unu n'ịhụnanya nke Chineke, na -eche ebere nke Onye -nwe -anyị Jisọs Kraịst nke na -eduba na ndụ ebighi -ebi. 22 Mee -kwa -ra ndi nwere obi -ebere ebere; 23 zọpụta ndị ọzọ site n'ịdọpụta ha n'ọkụ; merenụ ndị ọzọ ebere n'egwu, na -akpọ asị ọbụna uwe nke anụ ahụ metọrọ.
N'ihe banyere ndị enwetela enwete, ndị detụrụ onyinye onyinye nke eluigwe ọnụ, ma kerịta oke na Mmụọ Nsọ, wee detụ ire ọmarịcha okwu nke Chineke na ike nke afọ na -abịa, wee daa, ọ dịghị mkpa iweghachi ha ọzọ na nchegharị. (Ndị Hibru 6: 4-6) Ala nke nwere ogwu na uke mgbe ọ nwetasịrị mmiri ozuzo abaghị uru ọ dịkwa nso ịbụ onye a bụrụ ọnụ, a ga-agbakwa ọgwụgwụ ya ọkụ. Kama nke ahụ, ala nke na-enweta ngọzi sitere n'aka Chineke bụ nke dụrụ mmiri ozuzo ma na-amịpụta ihe ubi bara uru nye ndị ọ na-akọ maka ya (Hib 6: 7-8) ebe ha na -anata ihe ọmụma nke eziokwu ahụ, a gakwaghị achụ àjà maka mmehie, kama atụmanya dị egwu nke ikpe, na oke iwe nke ga -erepịa ndị mmegide. (Ndị Hibru 10: 25-27) Ntaramahụhụ ka njọ karịa ọnwụ kwesịrị onye zọkwasịrị ụkwụ Ọkpara Chineke, wee merụọ ọbara ọgbụgba ndụ nke e ji doo ya nsọ, wee kpasue mmụọ nke amara (Hib 10: 28-29) Ọbọ bụ nke Chineke ma ọ ga-akwụghachi-Onyenwe anyị ga-ekpe ndị ya ikpe. (Hib 10:30) Ọ bụ ihe dị egwu ịdaba n'aka Chineke dị ndụ. (Ndị Hibru 10:31)
Hụ na ọ dịghị onye ga-adanarị n’amara nke Chineke; ka “nkpọrọgwụ nke ilu” ghara ibilite na-akpata nsogbu (nke ọtụtụ ndị na-esikwa na ha merụọ) nakwa na ọ dịghị onye na-akwa iko ma ọ bụ onye na-adịghị ọcha. (Hib 12:15-16) Unu adịla ka Isọ, bụ́ onye rere otu nri ọkpara ya, bụ́ onye e mesịworo, mgbe ọ chọrọ iketa ngọzi ahụ, a jụrụ ya n’ihi na ọ dịghị ohere ọ bụla iji chegharịa, n’agbanyeghị na o ji chọọ ya. anya mmiri. (Hib 12:16-17) Ihe ọ bụla meriri mmadụ, nke ahụ bụ ohu. (2 Pita 2:19) N’ihi na ọ bụrụ na, mgbe onye ahụ gbanarịrị mmerụ nke ụwa site n’ọmụma nke Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị Jisọs Kraịst, ọ bụrụ na mmadụ dabakwa n’ime ha ọzọ wee merie, ọnọdụ ikpeazụ adịwo njọ karịa nke mbụ. (2 Pita 2:20) Ọ gara gara ma maghi uzọ ezi omume ka a ma marue ya, isi n’iwu-ns ahu laghachi azu. (2 Pita 2:21) Dị ka Okwu Chineke si kwuo, a na-echekwa eluigwe na ụwa ndị dị ugbu a maka ọkụ, bụ́ ndị e debere ya ruo ụbọchị ikpe na mbibi nke ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. (2 Pita 3:7)
1 Ya mere, ka anyị hapụ ozizi mmalite nke Kraịst gaa n'ihu ruo ntozu okè, ghara ịtọ ntọala ọzọ maka nchegharị site n'ọrụ nwụrụ anwụ na okwukwe n'ebe Chineke nọ, 2 na nkuzi gbasara ịsa ahụ, ibikwasị aka, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ikpe ebighi ebi. 3 Anyị ga -emekwa nke a ma ọ bụrụ na Chineke kwere. 4 N'ihi na ọ gaghị ekwe omume, n'ihe banyere ndị ahụ enwetela mbụ, ndị detụrụ onyinye nke eluigwe ire, sorokwa keta oke na Mmụọ Nsọ, 5 ma edetụla m ire ịdị mma nke okwu Chineke na ike nke ụwa na -abịa, 6 mb thene ahu ha we dapu, ime ka ha laghachi ọzọ na ncheghari, ebe ha nākpọgide kwa Ọkpara Chineke n'obe ọzọ ime ha ihe ọjọ, ha n himleda kwa Ya anya. 7 Maka ala na -a dụ mmiri ozuzo nke na -adakarị na ya, na -amịpụtakwa ihe ọkụkụ bara uru nye ndị a na -akọ ya, na -enweta ngọzi n'aka Chineke. 8 Ma ọ bụrụ na o nwere ogwu na uke, ọ baghị uru, ọ dịkwa nso ịbụ onye a bụrụ ọnụ, ọgwụgwụ ya ka a ga -agba ọkụ..
Ndị Hibru 10: 23-31
23 Ka anyị jidesie nkwupụta nke olile anya anyị ike n'amaghị jijiji, n'ihi na onye kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. 24 na ka anyị tụlee ka anyị ga -esi kpalie onwe anyị inwe ịhụnanya na ịrụ ezi ọrụ, 25 na -eleghara izukọ ọnụ anya, dịka ọ na -emekarị ụfọdụ, mana na -agbarịta ibe unu ume, na -agbakwa mbọ ka unu na -ahụ ụbọchị ahụ ka ọ na -eru nso. 26 N'ihi na ọ bụrụ na anyị amara ụma na -eme mmehie mgbe anyị nwetasịrị ihe ọmụma nke eziokwu, àjà agaghị adịkwa ọzọ maka mmehie, 27 kama ọ bu olile -anya di egwu nke ikpé, na ọnuma nke ọku nke g consumeripia ndi -nkpabariesu. 28 Onye ọ bụla nke wepụrụ iwu Mozis nwụrụ na -enweghị ebere na akaebe nke ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ. 29 Kedu ụdị ntaramahụhụ ka njọ, nke ị chere, ga -erite site na onye zọkwasịrị ụkwụ Ọkpara Chineke, wee merụọ ọbara ọgbụgba ndụ nke e ji doo ya nsọ., wee kpasuo mmụọ nke amara iwe? 30 N'ihi na anyị maara onye ahụ nke sịrị, “Ịbọ ọbọ bụ nke m; M ga -akwụ ụgwọ. ” Ọzọkwa, "Onyenwe anyị ga -ekpe ndị ya ikpe." 31 Ọ bụ ihe dị egwu ịdaba n'aka Chineke dị ndụ.
Ndị Hibru 12: 15-17
15 Hụ na ọ dịghị onye na -akwụsị inweta amara Chineke; ka ọ ghara inwe “mgbọrọgwụ nke ilu” nke na -ebute nsogbu, sitekwa na ya na -emetọ ọtụtụ; 16 na ọ dịghị onye na -akwa iko ma ọ bụ na -adịghị nsọ dịka Isọ, onye rere ọnọdụ ọkpara ya maka otu nri. 17 N'ihi na unu mara na n'ikpeazụ, mgbe ọ chọrọ iketa ngọzi ahụ, a jụrụ ya, n'ihi na ọ hụghị ohere ichegharị, n'agbanyeghị na o ji anya mmiri chọọ ya.
(2 Pita 2: 19-22)
19 Ha na -ekwe ha nkwa nnwere onwe, mana ha onwe ha bụ ohu nke ire ure. N'ihi na ihe ọ bụla nke na -emeri mmadụ, ọ bụ ohu. 20 N'ihi na ọ bụrụ na, mgbe ha gbanarịrị mmerụ nke ụwa site n'ọmụma nke Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị Jizọs Kraịst, etinyere ha ọzọ wee merie ha, ọnọdụ ikpeazụ adịla njọ karịa nke mbụ.. 21 N'ihi na ọ ga -akara ha mma ka ha ghara ịma ụzọ ezi omume karịa mgbe ha matara ya ka ha si n'iwu dị nsọ nke enyere ha. 22 Ihe ezi ilu ahụ kwuru mere ha: “Nkịta na -alaghachi n'ihe ọ na -asọ, ọgha, mgbe ọ sachara onwe ya, laghachikwa tụgharịa na apịtị.”
2 Pita 3: 7
7 ma site n'otu okwu ahụ, a na -echekwa elu -igwe na ụwa nke dị ugbu a maka ọkụ, na -echekwa ha ruo ụbọchị ikpe na mbibi nke ndị na -adịghị asọpụrụ Chineke..
Jizọs dọrọ ndị na-ahapụ ịhụnanya ha na mbụ aka ná ntị, na-asị: “Chetakwa ebe i siworo pụta; chegharịa, ma rụọ ọrụ ndị ahụ ị rụrụ na mbụ. Ma ọ́ bụghị ya, m ga-abịakwute gị wezuga ihe ndọba oriọna gị n’ebe ọ nọ, ma ọ bụrụ na i chegharịrị.” (Mkpu. 2:4-5) Jizọs dọrọ ọgbakọ ahụ aka ná ntị banyere mkpagbu na-asị, “Nwee okwukwe ruo ọnwụ, m ga-enyekwa gị okpueze bụ́ ndụ.” (Mkpu. 2:10) Jizọs gwara ndị ikpere arụsị na ịkwa iko rafuo, sị: “Chegharịanụ. Ma ọ́ bụghị ya, m ga-abịakwute gị ngwa ngwa wee were mma agha ọnụ m buso gị agha.” (Mkpu. 2:14-16) Nye ndị na-anabata mmụọ Jezibel, nke na-eduhie ọtụtụ mmadụ ka ha na-akwa iko na ikpere arụsị—Jizọs dọrọ ndị ha na ya na-akwa iko aka ná ntị banyere mkpagbu, ọ gwụla ma ha chegharịrị n’ọrụ ya. (Mkpu. 2:20-22) Onye ọ bụla kwesịrị ịma na Jizọs bụ onye na-enyocha uche na obi, na-enyekwa onye ọ bụla dị ka ọrụ ya si dị. (Mkpu. 2:23) Nye ndị na-ekwebeghị nkwa, ọ bụ naanị na ha ga-ejidesi ike ruo mgbe ọ ga-abịa. ( Mkpu 2:25 ) A maara ụfọdụ ndị dị ndụ, ma ha anwụọla. ( Mkpu. 3:1 ) Ha ga-eteta, mee ka ihe fọdụrụnụ na ndị na-aga ịnwụ anwụ sie ike, n’ihi na ọrụ ha ezughị ezu n’anya Chineke ya. ( Mkpu 3:2 ) Ha kwesịrị icheta ihe ha natara na ihe ha nụrụ ma debe ya, chegharịa. (Mkpu. 3:3) Ndị na-adịghị oyi ma ọ bụ ndị na-ekpo ọkụ, n'ihi na ha dị ṅara ṅara, ọ ga-agbụpụ ha ọnụ mmiri n'ọnụ ya. (Mkpu. 3:15-16) Ndị na-eju afọ ma na-eche na ọ dịghị ihe ha chọrọ ha, ha adịghị aghọta na ha bụ ndị nọ n'ahụhụ, nwee ọmịiko, ogbenye, kpuru ìsì, na ndị gba ọtọ. (Mkpu. 3:17) Jizọs dụrụ anyị ọdụ ka anyị zụta n'aka ya ọlaedo a nụchara anụcha, ka anyị wee baa ọgaranya, na uwe ọcha ka anyị wee yiwe onwe anyị, ka a ghara ịhụkwa ihere nke ịgba ọtọ anyị, ka anyị wee tee anyị mmanụ. anya, ka ayi we hu. ( Mkpu. 3:18 ) Ndị ọ hụrụ n’anya ka ọ na-abara mba ma na-adọ ha aka ná ntị, ya mere na-anụ ọkụ n’obi ma chegharịa. (Mkpu 3:19)
Mkpughe 2: 4-5
4 Ma enwere m nke a megide gị, na ị hapụla ịhụnanya ahụ i nwere na mbụ. 5 Ya mere, cheta ebe i siri daa; chegharịa, rụọkwa ọrụ ndị ị rụrụ na mbụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, aga m abịakwute gị wepu ihe ndọba oriọna gị n'ọnọdụ ya, belụsọ ma ị chegharịrị.
10 Atụla egwu ihe ị gaje ịta ahụhụ. Le, ekwensu gaje itubà ufọdu n'etiti unu n'ulo -nkpọrọ, ka ewe le unu ule, unu g havenwe kwa nkpab daysu ubọchi iri. Kwesị ntụkwasị obi ruo ọnwụ, m ga -enyekwa gị okpueze nke ndụ.
Mkpughe 2: 14-16
14 Ma enwere m ihe ole na ole megide gị: ị nwere ụfọdụ ebe ahụ na -ejigide nkuzi Belam, onye kuziri Belak ka o tinye ihe ịsụ ngọngọ n'ihu ụmụ Izrel, ka ha wee rie nri a chụrụ n'àjà nye arụsị ma mee ịkwa iko. 15 Ya mere, ị nwekwara ụfọdụ ndị jidere nkuzi nke ndị Nikolait. 16 Ya mere chegharịa. Ọ bụrụ na ọ bụghị, aga m abịakwute gị n'oge na -adịghị anya wee jiri mma agha nke ọnụ m buso ha agha.
Mkpughe 2: 20-25
20 Ma enwere m ihe megide gị, na ị na -anabata nwanyị ahụ Jezebel, onye na -akpọ onwe ya onye amụma nwanyị ma na -akụzi ma na -eduhie ndị ohu m ka ha na -akwa iko ma rie nri a chụrụ n'àjà nye arụsị. 21 M nyere ya oge ka o chegharịa, ma ọ jụrụ ichegharị site n'ịkwa iko ya. 22 Le, m ga -atụba ya n'elu ihe ndina, ndị mụ na ya kwara iko ka m ga -atụba n'oké mkpagbu, ọ gwụla ma ha chegharịrị n'ọrụ ya, 23 m ga -egbukwa ụmụ ya. Na nzukọ -nsọ niile ga -amara na abụ m onye na -enyocha uche na obi, na m ga -enye onye ọ bụla n'ime unu dịka ọrụ unu siri dị. 24 Ma ndị fọdụrụ na Taịataịra, ndị na -ejighị ozizi a, ndị na -amụtabeghị ihe ụfọdụ na -akpọ ihe omimi nke Setan, asị m unu, anaghị m ebo unu ibu ọzọ. 25 Naanị jide ihe i nwere ruo mgbe m ga -abịa.
Mkpughe 3: 1-3
Na1 “Degaara mmụọ ozi nke ụka dị na Sadis akwụkwọ, sị, 'Okwu nke onye nwere mmụọ asaa nke Chineke na kpakpando asaa. “'Amaara m ọrụ gị. Ị nwere aha nke ịdị ndụ, mana ị nwụrụ. 2 Teta, mee ka ihe fọdụrụ na nke na -aga ịnwụ sie ike, n'ihi na ahụghị m ọrụ gị ka ọ zuru oke n'anya Chineke m. 3 Ya mere, cheta ihe ị natara na nke ị nụrụ. Debe ya, chegharịa. Ọ bụrụ na ị gaghị eteta, m ga -abịa dị ka onye ohi, ị gaghịkwa ama awa m ga -abịa imegide gị.
Mkpughe 3: 15-19
15 “'Amaara m ọrụ gị: ị jụghị oyi, i kpoghịkwa ọkụ. Ọ dị m ka ya bụrụ na ị jụrụ oyi ma ọ bụ kpoo ọkụ! 16 Ya mere, maka na ị dị ukearaukeara, i kpoghị ọkụ, ị jụghịkwa oyi, m ga -agbụpụ gị ọnụ site n'ọnụ m. 17 N'ihi na ị na -ekwu, abụ m ọgaranya, emeela m ọgaranya, ọ dịghịkwa m mkpa ọ bụla, n'amaghị na ị bụ onye ọjọọ, onye nwere ọmịiko, ogbenye, onye ìsì, na onye gba ọtọ. 18 Ana m adụ gị ọdụ ka ị zụtara m ọla edo nke anụcha nụchara anụcha, ka i wee baa ọgaranya, na uwe ọcha ka i wee yiwe onwe gị uwe na ihere ịgba ọtọ gị agaghị ahụ, wee chekwaa ka ị tee anya gị mmanụ, ka i wee nwee ike. lee. 19 Ndị m hụrụ n'anya ka m na -abara mba ma na -adọ aka na ntị, yabụ nwee ịnụ ọkụ n'obi ma chegharịa.
Atụfula ntụkwasị obi gị, nke nwere nnukwu ụgwọ ọrụ. (Ndị Hibru 10:35) N'ihi na ntachi obi dị unu mkpa, ka unu wee nata nkwa ahụ mgbe unu mere uche Chineke. (Ndị Hibru 10:36) Ndị ezi omume nke Chineke ga -adị ndụ site n'okwukwe, ọ bụrụkwa na ọ laa azụ azụ, ọ nweghị mmasị na ya. (Ndị Hibru 10:38) Mana anyị abụghị nke ndị na -ala azụ azụ na ndị e bibiri, kama anyị bụ nke ndị nwere okwukwe ma chekwa mkpụrụ obi ha. (Ndị Hibru 10:39) Okwukwe bụ mmesi obi ike nke ihe ndị a na -ele anya ya, nkwenye nke ihe ndị a na -adịghị ahụ anya. (Ndị Hibru 11: 1) Site n'okwukwe anyị na -aghọta na e kere eluigwe na ụwa n'okwu Chineke, nke mere na ihe a na -ahụ anya esighị n'ihe a na -ahụ anya mee. (Ndị Hibru 11: 3) Ma enweghị okwukwe ọ gaghị ekwe omume ime ihe na -atọ ya ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke ga -abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na -akwụghachi ndị na -achọ ya ụgwọ ọrụ. (Ndị Hibru 11: 6) Site n'okwukwe ka e ji too ndị mgbe ochie (Hib 11: 2) Ebe ọ bụ na igwe ojii nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla, na mmehie nke na -ejikọ ọnụ nke ukwuu, ka anyị na -eji ntachi obi na -agba ọsọ ahụ e debere n'ihu anyị, na -elegara Jisọs anya, onye guzobere okwukwe anyị nke zuru oke, onye ọ joyụ e debere n'ihu ya tachiri obi n'obe, na -eleda ihere anya ma nọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke. (Hib 12: 1-2)
Tụlee onye ahụ nke tachiri obi n'aka ndị mmehie ụdị iro ahụ megide onwe ya, ka ike ghara ịgwụ gị ma ọ bụ daa mba. (Ndị Hibru 12: 3) N'ọgụ unu na -alụso mmehie, unu eguzogidebeghị ruo n'ịkwafu ọbara unu. (Hib 12: 4) Ị chefuola agbamume a na -akpọ gị dị ka ụmụ? "Nwa m, elela ịdọ aka ná ntị nke Onyenwe anyị anya, adakwala mbà mgbe ọ na -abara ya mba, n'ihi na Onyenwe anyị na -adọ onye ọ hụrụ n'anya aka na ntị, na -adọkwa nwa ọ bụla ọ nabatara ahụhụ." (Heb 12: 5-6) Ngọzi dịrị Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst! Dị ka nnukwu ebere ya si dị, o meela ka a mụọ anyị ọzọ maka olileanya dị ndụ site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ gaa n'ihe nketa nke na -adịghị emebi emebi, nke na -emerụghị emerụ, na nke na -adịghị emebi emebi, nke edobere n'eluigwe maka gị, onye ike nke Chineke ebe a na -eche nche site n'okwukwe maka nzọpụta dị njikere ikpughe n'oge ikpeazụ. (1Pet 1: 3-5) Na nke a ị na-a rejoiceụrị ọ ,ụ, n'agbanyeghị na ugbu a nwa oge, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọnwụnwa dị iche iche na-ewute gị, ka ezi okwukwe gị nwalere-dị oke ọnụ ahịa karịa ọlaedo na-ala n'iyi n'agbanyeghị na a nwalere ya site n'ọkụ — enwere ike ịchọta ya na -ebute otuto na otuto na nsọpụrụ na mkpughe nke Jizọs Kraịst. (1Pet 1: 6-7) Ọ bụ ezie na ị hụbeghị ya, ị hụrụ ya n'anya. Ọ bụ ezie na unu ahụghị ya ugbu a, unu kwere na ya wee rejoiceụrịa ọ joyụ nke a na -apụghị ịkọwa akọwa na nke jupụtara n'ebube, na -enweta nsonaazụ nke okwukwe unu, nzọpụta nke mkpụrụ obi unu. (1Pet 1: 8-9) Onye ọ bụla a mụrụ site na Chineke na-emeri ụwa, nke a bụkwa mmeri nke meriri ụwa-okwukwe anyị. (1 Jọn 5: 4)
Ndị Hibru 10: 35-39
35 Ya mere atụfula ntụkwasị obi gị, nke nwere ụgwọ ọrụ dị ukwuu. 36 N'ihi na ntachi -obi di unu nkpà, ka, mb whene unu meworo ihe Chineke nāchọ, ka unu we nata nkwa ahu. 37 N'ihi na, “Ọ fọdụrụ nwa mgbe, onye na -abịa abịakwa ọ gaghị anọ ọdụ; 38 ma onye ezi omume m ga -adị ndụ site n'okwukwe, ma ọ bụrụ na ọ laa azụ, mkpụrụ -obi m enweghị mmasị n'ebe ọ nọ. " 39 Mana anyị abụghị nke ndị na -asụ laa azụ na ndị e bibiri, kama nke ndị nwere okwukwe ma chekwa mkpụrụ obi ha.
Ndị Hibru 11: 1-7
1 Ugbu a okwukwe bụ nkwenye nke ihe ndị a na -ele anya, nkwenye nke ihe a na -ahụghị anya. 2 N'ihi na ọ bụ site na ya ka ndị mmadụ nwetara otuto ha. 3 Site n'okwukwe anyị na -aghọta na e kere eluigwe na ụwa n'okwu Chineke, nke mere na ihe a na -ahụ anya esighị n'ihe a na -ahụ anya mee ya.
4 Okwukwe ka Ebel ji chụọrọ Chineke aja nke a na-anara nke ọma karịa nke Ken, nke e sitere na ya jaa ya mma dị ka onye ezi omume, Chineke jara ya mma site na ịnara onyinye ya. O sitekwa n’okwukwe ya, ọ bụ ezie na ọ nwụrụ, ọ ka na-ekwu okwu. 5 Okwukwe ka e ji bulie Inọk ka ọ ghara ịhụ ọnwụ, ma ahụghị ya, n'ihi na Chineke akpọrọ ya. Ma tutu e were ya, a jara ya mma na ọ na -eme ihe dị Chineke mma. 6 Na enweghị okwukwe ọ gaghị ekwe omume ime ihe na -atọ ya ụtọ, n'ihi na onye ọ bụla nke ga -abịaru Chineke nso aghaghị ikwere na ọ dị adị nakwa na ọ na -akwụghachi ndị na -achọ ya ụgwọ ọrụ.. 7 Site n'okwukwe, mgbe Chineke dọrọ Noa aka na ntị banyere ihe ndị a na -ahụbeghị, ọ tụrụ egwu wee wuo ụgbọ maka ịzọpụta ezinụlọ ya. Site na nke a, ọ mara ụwa ikpe wee bụrụ onye nketa nke ezi omume nke sitere n'okwukwe.
Ndị Hibru 11: 32-40
32 Gịnị ọzọkwa ka m ga -ekwu? N'ihi na oge ga -agwụnahụ m ịkọ maka Gideọn, Berak, Samson, Jefta, Devid na Samuel na ndị amụma- 33 onye sitere n'okwukwe merie alaeze niile, mee ka ikpe ziri ezi sie ike, enwetara nkwa, kwụrụ ọnụ ọdụm, 34 menyụọ ike ọkụ, gbapụ n'ọnụ mma agha, bụrụ ndị siri ike n'adịghị ike, bụrụ dike n'agha, chụpụ ndị agha mba ọzọ. 35 Ụmụ nwanyị natara ndị ha nwụrụ anwụ site na mbilite n'ọnwụ. A tara ụfọdụ ahụhụ, na -ajụ ịnakwere ntọhapụ, ka ha wee bilite ọzọ wee bie ndụ ka mma. 36 Ndị ọzọ nwetara ịkwa emo na ịpịa ihe, na ọbụna ụdọ na mkpọrọ. 37 Ẹma ẹtọn̄ọ mmọ ke itiat, ẹsiak mmọ iba, ẹda akan̄kan̄ ẹwot mmọ. Ha na -agagharị na akpụkpọ atụrụ na ewu, ndị nọ n'ụkọ, ndị nọ n'ahụhụ, ndị a na -emegbu emegbu- 38 nke ụwa ekwesighị ekwesi maka ya — na -awagharị n'ọzara na ugwu, na n'ọgba na n'ọgba nke ụwa. 39 Ma ndị a niile, ọ bụ ezie na a jara ha mma site n'okwukwe ha, ha enwetaghị ihe e kwere na nkwa, 40 ebe Chineke nyere ayi ihe ka nma, ka ewe ghara ime ka ha zue okè ma ewezuga ayi.
Ndị Hibru 12: 1-6
1 Ya mere, ebe anyị nwere oke igwe nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka ayi wezuga kwa ihe ọ bụla dị arọ, na mmehie nke na -ejikọ ọnụ nke ukwuu, ka anyị werekwa ntachi obi gbaa ọsọ ahụ e debere n'ihu anyị., 2 na-ele anya na Jisos, onye guzobere na onye mezuru okwukwe anyi, onye maka o joyu ahu e debere n’ihu ya diri obe, na-eleghara ihere anya, wee noo ala n’aka nri nke ocheeze Chineke 3 Tụlee onye ahụ nke tachiri obi n'aka ndị mmehie ụdị asị ahụ megide onwe ya, ka ike ghara ịgwụ gị ma ọ bụ daa mba. 4 N'ọgụ unu na -alụ megide mmehie, unu eguzogidebeghị ruo n'ịkwafu ọbara unu. 5 Ị chefuola agbamume nke na -agwa gị dịka ụmụ? “Nwa m, elela ịdọ aka na ntị nke Onyenwe anyị anya, adakwala mbà mgbe ọ na -abara gị mba. 6 N'ihi na Jehova na -adọ onye ọ hụrụ n'anya aka na ntị, Ọ na -adọkwa nwa nwoke ọ bụla ọ nabatara aka. "
(1 Pita 1: 3-9)
3 Ngọzi na -adịrị Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst! Dịka oke ebere ya siri dị, o meela ka a mụọ anyị ọzọ maka olileanya dị ndụ site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ, 4 ka ọ bụrụ ihe nketa nke pụrụ ire ure, nke na -emerụghị emerụ, nke na -adịghịkwa emebi emebi, nke edobere maka gị n'eluigwe, 5 ndi esitere na ike Chineke chekwa site n'okwukwe maka nzọpụta a na -aga ikpughe n'oge ikpeazu. 6 Nihi nke a, unu na -a rejoiceụrị ọ rejoiceụ, ọ bụ ezie na ugbu a, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọnwụnwa dị iche iche na -eme unu obi mgbawa, 7 ya mere na nwalere ezi okwukwe gị - dị oke ọnụ ahịa karịa ọla -edo na -ala n'iyi n'agbanyeghị na a nwalere ya n'ọkụ— Enwere ike ịhụ ka ọ na -ebute otuto na otuto na nsọpụrụ na mkpughe nke Jizọs Kraịst. 8 Ọ bụ ezie na ị hụbeghị ya, ị hụrụ ya n'anya. Ọ bụ ezie na unu ahụghị ya ugbu a, unu kwere na ya wee rejoiceụrịa ọ withụ nke a na -apụghị ịkọwa akọwa na jupụta n'ebube, 9 na -enweta ngwụcha nke okwukwe unu, nzọpụta nke mkpụrụ obi unu.
4 n'ihi na onye ọ bụla a mụrụ site na Chineke na -emeri ụwa. Ma nke a bụ mmeri nke meriri ụwa - okwukwe anyị.
Cheta na e kewapụrụ unu n’oge ahụ n’ebe Kraịst nọ, ndị e kewapụrụ n’alaeze Izrel na ndị ala ọzọ n’ime ọgbụgba-ndụ nile nke nkwa, ndị na-enweghị olileanya na enweghị Chineke n’ụwa. (Efe 2:12) Ma ugbu a n’ime Kraịst Jizọs, e mewo ka unu ndị nọbu n’ebe dị anya bịa nso site n’ọbara Kraịst. ( Efe 2:13 ) N’ihi na site n’aka ya ka anyị niile nwere ohere n’otu mmụọ nsọ gakwuru Nna ahụ. (Ndị Efesọs 2:18) Ya mere, unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị ọbịa, kama unu bụ ụmụ amaala ibe unu na ndị nsọ na ndị ezinụlọ Chineke, ndị e wukwasịrị n’elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, Kraịst Jizọs n’onwe ya bụ isi nkuku. onye ihe owuwu ahụ dum, ebe e jikọtara ọnụ, na-eto eto ka ọ bụrụ ụlọ nsọ n’ime Onyenwe anyị. (Efe 2:19-21) N’ime ya ka a na-ewukwa unu ọnụ ka ha bụrụ ebe obibi maka Chineke site na Mmụọ Nsọ. (Efe 2:22) Anyị na-ekele Nna, bụ́ onye meworo ka anyị tozuo iketa òkè n’ihe nketa nke ndị nsọ n’ìhè. (Kọl 1:12) Chineke anapụtala anyị n'ọchịchịrị wee bufee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, onye anyị nwere mgbapụta n'ime ya, mgbaghara nke mmehie. ( Ndị Kọl 1: 13-14 )
Anụ na ọbara enweghị ike iketa alaeze Chineke, ma ọ bụ ihe na -emebi emebi adịghị eketa ereghị ure. (1 Ndị Kọrịnt 15:50) A ga -agbanwe anyị niile, n'otu ntabi anya, n'otu ntabi anya, n'oge opi ikpeazụ - N'ihi na opi ga -ada, a ga -akpọlitekwa ndị nwụrụ anwụ na -apụghị ire ure, a ga -agbanwekwa anyị. (1 Ndị Kọrịnt 15: 51-52) Mgbe ihe na-emebi emebi na-eyikwasị ihe na-adịghị emebi emebi, na onye na-anwụ anwụ eyikwasị anwụghị anwụ, mgbe ahụ okwu a edere ga-emezu: “E lodawo ọnwụ na mmeri” na, “Ọnwụ, olee ebe ọ nọ? mmeri gị? Ọnwụ, olee ebe ọgbụgba gị dị? ” (1 Ndị Kọrịnt 15: 54-55) Ihe ọgbụgba nke ọnwụ bụ mmehie, ike nke mmehie bụkwa iwu, mana ekele dịrị Chineke, onye na-enye anyị mmeri site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. (1 Ndị Kọrịnt 15: 56-57) Ya mere, guzosienụ ike, bụrụkwa ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, na-arụbiga ọrụ Onyenwe anyị ókè mgbe niile, na-amara na n'ime Onyenwe anyị ndọgbu unu na-adọgbu onwe unu n'ọrụ abụghị n'efu. (1 Ndị Kọrịnt 15:58)
Ahụhụ ndị dị n’oge a abaghị uru iji tụnyere ebube ahụ a ga-ekpughere anyị. (Ndị Rom 8:18) N'ihi na ihe e kere eke na-atụsi anya ike ịhụ mkpughe nke ụmụ Chineke. (Ndị Rom 8:19) N'ihi na edoro ihe e kere eke n'okpuru ihe efu, n'olileanya na a ga-atọhapụ ihe e kere eke n'onwe ya n'agbụ nke ire ure ma nweta nnwere onwe nke ebube nke ụmụ Chineke. (Ndị Rom 8:20-21) Ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ, na-asụ ude n’ime obi ka ha na-echesi ike ka e kuchiri ha dị ka ụmụ, ihe mgbapụta nke ahụ ha. (Ndị Rom 8: 23) N'ihi na n'olileanya a ka a zọpụtara anyị - ugbu a olileanya nke a na-ahụ anya abụghị olileanya. (Rom 8:24) Ma anyị na-atụ anya ihe anyị na-adịghị ahụ anya, anyị jikwa ndidi na-echere ya. (Ndị Rom 8:25)
Ihe ọ bụla uru anyị nwere, anyị kwesịrị ịgụ dị ka ihe efu n'ihi Kraịst. (Fil 3:7) N’ezie, anyị kwesịrị ịgụ ihe nile dị ka mfu n’ihi uru na-enweghị atụ nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. (Fil 3:8) N’ihi ya, anyị na-atụfu ihe nile, na-agụkwa ha dị ka ihe mkpofu, ka anyị wee nweta Kraịst, bụrụkwa ndị a hụrụ n’ime ya, n’enweghị ezi omume nke anyị onwe anyị bụ́ nke sitere n’iwu, kama ka anyị nwee ezi omume nke anyị onwe anyị nke sitere n’iwu. nke sitere n'okwukwe na Kraist, ezi omume sitere na Chineke nke dabere n'okwukwe- ka ayi we mara Ya na ike nke nbilite-n'ọnwu-Ya, we keta kwa ahuhu-Ya nile, dika Ya n'ọnwu-Ya, ka n'uzọ ọ bula ayi we nwe ike iru ndu ahu. mbilite n’ọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ. (Fil 3:9-11) Ọ bụghị na anyị enwetaworị nke a ma ọ bụ na anyị zuo okè, kama anyị na-agbalịsi ike ime ya nke anyị, n’ihi na Kraịst Jizọs emewo anyị nke ya. (Fil 3:12) Anyị kwesịrị ichefu ihe dị n’azụ ma na-agbasi mbọ ike n’ihe dị n’ihu, na-agbasi mbọ ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ maka ihe nrite nke ọkpụkpọ eluigwe nke Chineke n’ime Kraịst Jizọs. (Fil 3:13-14) Ọtụtụ ndị na-eje ije dị ka ndị iro nke obe Kraịst, ọgwụgwụ ha bụkwa mbibi, na-atụkwasị uche n’ihe ndị dị n’ụwa. (Fil 3:18-19) Ma ọbụbụeze anyị dị n’eluigwe, anyị na-echerekwa onye nzọpụta site na ya, Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, onye ga-eme ya. gbanwee ahụ anyị dị ala, site n’ike nke na-enyere ya aka ido onwe ya ihe nile n’okpuru onwe ya, ịdị ka ahụ́ ya dị ebube. ( Ndị Filipaị 3: 20-21 )
(Ndị Efesọs 2: 12-22)
12 cheta na e kewapụrụ gị n'oge ahụ n'ebe Kraịst nọ, bụrụ onye e kewapụrụ na ọhaneze nke Israel na ndị ọbịa na ọgbụgba ndụ nke nkwa, ndị na -enweghị olileanya, na -enweghị Chineke n'ụwa. 13 Ma ugbu a n'ime Kraịst Jizọs unu ndị nọbu n'ebe dị anya ka ọbara nke Kraịst bịaruo unu nso. 14 N'ihi na ya onwe ya bụ udo anyị, onye mere anyị abụọ otu ma kwatuo anụ ahụ ya na mgbidi nkewa iro 15 site n'iwezuga iwu nke ihe enyere n'iwu nke egosipụtara na emume -nsọ, ka o wee mepụta n'ime onwe ya otu nwoke ọhụrụ n'ọnọdụ abụọ, na -eme udo, 16 ka O we me ka ayi abua na Chineke di n'otù aru site n'obe, si otú a na -egbu iro. 17 O wee bịa kwusaara unu ndị nọ ebe dị anya udo na udo nye ndị nọ nso. 18 N'ihi na site na ya anyị abụọ nwere ohere na otu mmụọ na Nna. 19 Ya mere unu abụkwaghị ndị ọbịa na ndị ọbịa, kama unu bụ ụmụ amaala nke ndị nsọ na ndị otu ezi na ụlọ nke Chineke, 20 wuru na ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, Kraịst Jizọs n'onwe ya bụ isi nkuku, 21 Onye nhazi ya niile, na -ejikọ ọnụ, na -eto n'ime ụlọ nsọ n'ime Onye -nwe. 22 N'ime ya ka a na -ewulitekwa unu ọnụ ka ị bụrụ ebe obibi nke Chineke site na Mmụọ.
12 n givingkele Nna, Onye mere ka I tozue ikere òkè n'ihe -nketa ndi nsọ n'ìhè. 13 Ọ napụtara anyị n'ọchịchịrị wee nyefee anyị n'alaeze nke Ọkpara ya ọ hụrụ n'anya, 14 Onye anyị nwere mgbapụta n'ime Ya, bụ mgbaghara mmehie.
1 Ndị Kọrịnt 15: 50-58
50 Ana m agwa unu nke a, ụmụnna: anụ ahụ na ọbara apụghị iketa alaeze Chineke, onye na -emebi emebi adịghịkwa eketa ereghị ure. 51 Lee! Ana m agwa gị ihe omimi. Anyị niile agaghị ehi ụra, mana anyị niile ga -agbanwe, 52 n'otu ntabi anya, n'otu ntabi anya, n'oge opi ikpeazụ. N'ihi na a ga -afụ opi, a ga -akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ na -apụghị ire ure, a ga -agbanwekwa anyị. 53 N'ihi na aru a nke pụrụ ire ure aghaghị iyiri ihe na -apụghị ire ure, ahụ a na -anwụ anwụ aghaghị iyikwasị anwụghị anwụ. 54 Mgbe ihe na -emebi emebi na -eyikwasị ereghị ere, onye na -anwụ anwụ na -eyikwasị anwụghị anwụ, mgbe ahụ ga -emezu okwu e dere: “E lodawo ọnwụ na mmeri.” 55 “Ọnwụ, olee mmeri gị? Ọnwụ, olee ebe ọgbụgba gị dị? ” 56 Ihe ọgbụgba nke ọnwụ bụ mmehie, ike nke mmehie bụkwa iwu. 57 Ma ekele dịrị Chineke, onye na -enye anyị mmeri site n'aka Onyenwe anyị Jisọs Kraịst. 58 Tya mere, ụmụnna m m hụrụ n'anya, guzosienụ ike, bụrụ ndị a na -apụghị ịgbagha agbagha, na -arụbiga ọrụ Onyenwe anyị ókè mgbe niile, ebe unu maara na n'ime Onyenwe anyị ndọgbu unu na -adọgbu onwe unu n'ọrụ abụghị n'efu..
Ndị Rom 8: 18-25
18 n'ihi na Echere m na ahụhụ nke oge a ekwesighi ka atụnyere ebube nke a ga -ekpughere anyị. 19 N'ihi na ihe nile e kere eke n wachere nkpughe nke umu-ndikom Chineke. 20 N'ihi na e doro ihe e kere eke ịbụ ihe efu, ọ bụghị ọchịchọ ya, kama n'ihi onye doro ya, ka o nwee olileanya 21 na ihe okike n'onwe ya ga -enwere onwe ya pụọ ​​n'agbụ nke ire ure wee nweta nnwere onwe nke ebube nke ụmụ Chineke. 22 N'ihi na anyị matara na ihe niile e kere eke nọ na-asụkọ ude na ime na-amụ nwa ruo ugbu a. 23 Ọ bụghịkwa naanị ihe e kere eke, kama anyị onwe anyị, ndị nwere mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ, na -asụ ude n'ime anyị ka anyị na -echesi ike dị ka ụmụ, mgbapụta nke ahụ anyị.. 24 N'ihi na a zọpụtara anyị n'olileanya a. Ma olile-anya nke ahuru anya abughi olile-anya. N'ihi na onye na-enwe olileanya maka ihe ọ na-ahụ? 25 Ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya maka ihe anyị na -ahụghị, anyị na -eji ndidi chere ya.
(Ndị Filipaị 3: 7-11)
7 Ma uru ọ bụla m nwere, agụrụ m ya dị ka mfu n'ihi Kraịst. 8 N'ezie, Ana m agụ ihe niile dị ka ihe na -abaghị uru n'ihi uru dị oke mkpa nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m. N'ihi ya, ahụrụ m ihe niile funahụrụ m wee gụọ ha ka ihe mkpofu, ka m wee nweta Kraịst 9 ma bụrụ ndị a hụrụ n'ime ya, na -enweghị ezi omume nke m nke sitere n'iwu, kama nke sitere na okwukwe na Kraịst, ezi omume nke sitere na Chineke nke dabere n'okwukwe— 10 ka m wee mara ya na ike nke mbilite n'ọnwụ ya, na ekekọrịta oke nhụjuanya ya, wee dị ka ya n'ọnwụ ya, 11 ka m wee nwee ike nweta mbilite n'ọnwụ site n'ụzọ ọ bụla.
(Ndị Filipaị 3: 12-21)
12 Ọ bụghị na enwetala m nke a ma ọ bụ emechaala m nke ọma, mana m na -agbasi mbọ ike ime ya nke m, n'ihi na Kraịst Jizọs mere m nke ya. 13 Ụmụnna m, echeghị m na m mere ya nke m. Mana otu ihe ka m na -eme: echefu ihe dị n'azụ na ịgbasi mbọ ike maka ihe dị n'ihu, 14 Anọ m na -aga n'ihu n'ihe mgbaru ọsọ ahụ maka inweta ihe nrite nke ọkpụkpọ elu nke Chineke n'ime Kraịst Jizọs. 15 Ka anyị ndị tozuru oke chee echiche otu a, ma ọ bụrụ na ị na -eche n'ụzọ ọ bụla, Chineke ga -ekpughere gị nke ahụ. 16 Naanị ka anyị jidesie ike n'ihe anyị nwetara. 17 Ụmụnna, sonye na -e meomi m, lekwasịkwa anya na ndị na -eje ije dị ka ihe nlereanya unu nwere n'ime anyị. 18 Maka ọtụtụ, ndị m na -agwakarị gị ma ugbu a jiri anya mmiri na -agwa gị, na -eje ije dị ka ndị iro nke obe Kraịst. 19 Ọgwụgwụ ha bụ mbibi, chi ha bụ afọ ha, ha na -anya isi na ihere ha, na -atụkwasị uche n'ihe ụwa. 20 Mana ala anyị dị n'eluigwe, site na ya anyị na -echere Onye nzọpụta, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, 21 onye ga -agbanwe ahụ anyị dị ala ka ọ dị ka ahụ ya dị ebube, site n'ike nke na -enyere ya aka idobe ihe niile n'okpuru onwe ya.
Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na -achị ndị eze n'ụwa - ọ hụrụ anyị n'anya wee jiri ọbara ya tọhapụ anyị site na mmehie anyị wee mee anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya. (Mkpu 1: 5-6) Ọ ga-enye onye meriri emeri iri mkpụrụ nke osisi nke ndụ, nke dị na paradaịs nke Chineke. (Mkpu. 2: 7) Kwesịrị ntụkwasị obi ruo ọnwụ, ọ ga -enyekwa gị okpueze nke ndụ. (Mkpu. 2:10) Ọnwụ nke abụọ agaghị emerụ onye meriri. (Mkpu. 2:11) Onye ga -emeri ka ọ ga -enye ụfọdụ mana ahụ zoro ezo, ọ ga -enyekwa ya okwute ọcha, nke edere aha ọhụrụ na nkume ahụ nke onye ọ bụla na -amaghị ma e wezụga onye natara ya. (Mkpu. 2:17) Onye meriri wee debekwa ọrụ ya ruo ọgwụgwụ, onye ahụ ka ọ ga -enye ikike ịchị mba niile, ọ ga -ejikwa mkpanaka igwe chịa ha, dịka mgbe a na -agbajikwa ite ụrọ. dika ya onwe -ya natara ike n'aka Nna -ya. (Mkpu 2: 26-27) Ọ ga-enyekwa ya kpakpando ụtụtụ. (Mkpu 2:28) Onye meriri ga -eyiri uwe ọcha, ọ gaghịkwa ehichapụ aha ya n'akwụkwọ nke ndụ - ọ ga -ekwupụta aha ya n'ihu Nna ya na n'ihu ndị mmụọ ozi Nna. (Mkpu 3: 5) Onye meriri emeri, ọ ga -eme ka ọ bụrụ ogidi n'ụlọ nsọ nke Chineke ya - ọ gaghị apụ na ya, ọ ga -edekwasịkwa ya aha Chineke ya na aha obodo. nke Chineke ya, Jerusalem ọhụrụ, nke na -agbadata site na Chineke ya site n'eluigwe, na aha ọhụrụ nke ya. (Mkpu. 3:12) Onye na -emeri emeri, ọ ga -enye ya ohere ịnọnyere ya n'ocheeze ya, dịka o meriri wee soro Nna ya nọdụ ala n'ocheeze Nna ya. (Mkpughe 3:21)
Ngọzi na nsọ ka onye ahụ na-ekere òkè na mbilite n’ọnwụ mbụ! N'ime ndị dị otú ahụ ọnwụ nke abụọ enweghị ike, ma ha ga-abụ ndị nchụàjà nke Chineke na nke Kraịst, ha ga-esokwa ya chịa otu puku afọ. (Mkpu. 20:6) Mgbe ahụ, obodo nsọ ahụ, bụ́ Jeruselem ọhụrụ, ga-esi n’ebe Chineke nọ bịa, bụ́ nke a kwadebere dị ka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ e mere mma maka di ya. ( Mkpu 21:2 ) Ebe obibi Chineke ga-anọnyere mmadụ. Ya na ha ga-ebi, ha ga-abụkwa ndị ya, Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha dị ka Chineke ha. (Mkpu. 21:3) Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n'anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru újú ma ọ bụ ịkwa ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ, n'ihi na ihe mbụ agabigawo. ( Mkpu 21:4 ) Ọ ga-eme ka ihe niile dị ọhụrụ. (Mkpu. 21:5) Ọ ga-esi na isi iyi nke mmiri nke ndụ nye ndị akpịrị na-akpọ nkụ n'akwụghị ụgwọ. ( Mkpu 21:6 ) Osimiri nke mmiri nke ndụ, nke na-egbuke egbuke dị ka kristal, ga-esi n’ocheeze Chineke na nke Nwa Atụrụ ahụ na-asọpụta n’etiti okporo ámá nke Jerusalem Ọhụrụ; ọzọ kwa, n'akuku nke-ọzọ nke osimiri ahu, ka osisi nke ndu gādi na nkpuru-osisi di iche iche nke iri na abua, nāmiputa nkpuru-ya kwa ọnwa. Akwụkwọ osisi ahụ ga-abụ maka ọgwụgwọ mba dị iche iche. (Mkpu. 22:1-2) A gaghịkwa enwe ihe ọ bụla a bụrụ ọnụ, kama ocheeze Chineke na nke Nwa Atụrụ ahụ ga-adị n'ime ya, ndị ohu ya ga-efekwa Chineke ofufe. (Mkpu. 22:3) Ha ga-ahụ ihu ya, aha ya ga-adịkwa n'egedege ihu ha. ( Mkpu 22:4 ) abalị agaghị adịkwa. Ìhè oriọna ma-ọbu anyanwu agaghi-achọ kwa ha: n'ihi na Onye-nwe-ayi Jehova gābu ìhè-ha, ha gābu kwa eze rue mb͕e nile ebighi-ebi. (Mkpu. 22:5) Onye meriri emeri ga-enweta ihe nketa a, Chineke ga-abụkwa Chineke ya, ọ ga-abụkwa Ọkpara Chineke. (Mkpu. 21:7) Ma ndị na-atụ ụjọ, ndị na-enweghị okwukwe, ndị na-asọ oyi, ndị na-egbu ọchụ, ndị na-akwa iko, ndị na-agba afa, na ndị na-ekpere arụsị, na ndị ụgha niile, òkè ha ga-abụ n’ọdọ mmiri ahụ nke na-eji ọkụ na sọlfọ na-ere, bụ́ nke dị n’ime ya. ọnwụ nke abụọ. (Mkpu 21:8)
Mkpughe 1: 5-6
5 na site Jizọs Kraịst bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na -achị ndị eze n'ụwa.
Nke onye hụrụ anyị n'anya ma jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị 6 me -kwa -ra ayi ala -eze, ndi -nchu -àjà nye Chineke na Nna -Ya, ka otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
Mkpughe 2: 7 (ESV), iri mkpụrụ sitere n'osisi nke ndụ
7 M ga -enye onye na -emeri emeri iri mkpụrụ si n'osisi nke ndụ, nke dị na paradaịs Chineke. '
Mkpughe 2: 10-11 (ESV), okpueze nke ndụ
Kwesị ntụkwasị obi ruo ọnwụ, m ga -enyekwa gị okpueze nke ndụ. 11 Onye nwere ntị, ya nụrụ ihe mmụọ nsọ na -agwa ụka. Ọnwụ nke abụọ agaghị emerụ onye meriri emeri. '
Mkpughe 2:17 (ESV), mana zoro ezo na aha ọhụrụ
M ga -enye onye meriri emeri mana zoro ezo, m ga -enyekwa ya okwute ọcha, nke edere aha ọhụrụ n'elu nkume ahụ nke onye ọ bụla na -amaghị ma e wezụga onye natara ya. '
Mkpughe 2: 26-28 (ESV), ikike nke mba dị iche iche
26 Onye na -emeri emeri ma na -edebekwa ọrụ m ruo ọgwụgwụ, onye ahụ ka m ga -enye ike n'elu mba niile, 27 Ọ ga -ejikwa mkpanaka ígwè chịa ha, dị ka mgbe a na -agbajikwa ite ụrọ, ọbụna dị ka mụ onwe m natara ikike n'aka Nna m. 28 M ga -enyekwa ya kpakpando ụtụtụ.
Mkpughe 3: 5 (ESV), uwe ọcha na mmesi obi ike nke ndụ
5 Onye meriri emeri ga -eyikwasị ya uwe ọcha, agaghịkwa m ehichapụ aha ya n'akwụkwọ nke ndụ. Aga m ekwupụta aha ya n'ihu Nna m na n'ihu ndị mmụọ ozi ya.
NKPUGHE 3:12, ogidi n'ulo uku Chinekem
12 Onye na -emeri, m ga -eme ka ọ bụrụ ogidi n'ụlọ nsọ nke Chineke m. Ọ dịghị mgbe ọ ga -esi na ya pụọ, m ga -edekwasịkwa ya aha Chineke m, na aha obodo nke Chineke m, Jerusalem ọhụrụ, nke si na Chineke m rịdata site n'eluigwe, na aha ọhụrụ nke m.
Mkpughe 3:21 (ESV), ka mụ na m nọdụ ala n'ocheeze m
21 Onye na -emeri emeri, m ga -enye ya ka mụ na ya nọdụ ala n'ocheeze m, dịka m meriri wee soro Nna m nọdụ ala n'ocheeze ya.
Mkpughe 20: 6 (NIV) Ngọzi na -adịrị onye na -ekere oke na mbilite n'ọnwụ mbụ
6 Ngọzi na nsọ ka onye ahụ bụ onye na -ekere oke na mbilite n'ọnwụ mbụ! N'ime ụdị ọnwụ nke abụọ a enweghị ike, kama ha ga -abụ ndị nchụàjà nke Chineke na nke Kraịst, ha ga -esokwa ya chịa otu puku afọ.
Mkpughe 21: 1-8, Eluigwe Ọhụrụ na Ụwa Ọhụrụ
1 M wee hụ eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ, n'ihi na eluigwe mbụ na ụwa mbụ agabigawo, oke osimiri ahụ adịkwaghị. 2 M'we hu obodo nsọ ahu, bú Jerusalem ọhu, ka ọ n outsi n'elu -igwe ridata, site n'ebe Chineke nọ, edoziwo ya dika nwanyi anālu ọhu nke achọworo ya mma. 3 M'we nu oké olu ka ọ n thesi n'oche -eze ahu nāsi, Le, ebe -obibi Chineke di n'etiti madu. Ya na ha ga -ebikwa, ha ga -abụkwa ndị nke ya, Chineke n'onwe ya ga -anọnyekwara ha dịka Chineke ha. 4 Ọ ga -ehichapụkwa anya mmiri niile n'anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ ịkwa akwa ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ, n'ihi na ihe mbụ agabigawo.. "
5 Onye ahụ nke nọ ọdụ n'ocheeze ahụ wee sị, "Lee, ana m eme ihe niile ka ha dị ọhụrụ." Ọzọkwa, ọ sịrị, "Dee nke a, n'ihi na okwu ndị a kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa eziokwu." 6 O wee sị m, "Emeela ya! Abụ m Alfa na Omega, mmalite na ọgwụgwụ. M ga -enye onye akpịrị na -akpọ nkụ mmiri site na isi iyi nke mmiri nke ndụ na -akwụghị ụgwọ. 7 Onye nersmeri g willnweta ihe -nketa a: Mu onwem gābu -kwa -ra ya Chineke, ya onwe -ya gābu -kwa -ram nwa. 8 Ma maka ndị ụjọ, ndị na -ekweghị ekwe, ndị ihe arụ, maka ndị na -egbu ọchụ, ndị na -akwa iko, ndị dibịa afa, ndị na -ekpere arụsị, na ndị ụgha niile, òkè ha ga -adị n'ime ọdọ nke ji ọkụ na sọlfọ na -ere, nke bụ ọnwụ nke abụọ. "
Mkpughe 22: 1-5 (Osimiri Nwoke)
1 Mgbe ahụ mmụọ ozi ahụ gosiri m osimiri nke mmiri nke ndụ, na -enwu dị ka kristal, na -esi n'ocheeze Chineke na nke Nwa Atụrụ ahụ na -asọpụta 2 site n’etiti okporo ámá obodo ahụ; ọzọkwa, n'akụkụ abụọ nke osimiri ahụ, osisi nke ndụ ya na ụdị mkpụrụ osisi iri na abụọ, na -amị mkpụrụ ya kwa ọnwa. Akwụkwọ osisi ahụ bụ maka ịgwọ mba dị iche iche. 3 A gaghị enwekwa ihe a bụrụ ọnụ, kama ocheeze Chineke na nke Nwa Atụrụ ahụ ga -adị n'ime ya, ndị na -ejere ya ozi ga -efekwa ya ofufe. 4 Ha ga -ahụ ihu ya, aha ya ga -adịkwa n'egedege ihu ha. 5 Ndien okoneyo ididụhe aba. Ha agaghị achọ ọkụ oriọna ma ọ bụ anyanwụ, n'ihi na Onyenwe anyị Chineke ga -abụ ìhè ha, ha ga -achịkwa ruo mgbe niile ebighị ebi